တပ်နှင့်ပြည်သူလက်တွဲကူ by Satt Ka - issuu
အတွ(ဲ ၁)စာစောင်(၁) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏လမ်းညွန်ချက် (၇) ချက် ၁။
နိုင်ငံတော်ဖ့စွဲ ည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေသည် မြန်မာပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ဟုခေါ်တွင်စေသောလွတ်လပ်သည့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် သမ္မတ နိုင်ငံ၏
ဖွ့စဲည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ဖြစ်စေရမည်။ထို့ပြင်၂။
ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအတွင်းဖွ့စဲည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကသတ်မှတ်ဖော်ပြသည့်တသီးပုဂ္ဂလပြည်နယ်များသည်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတွင်
အာဏာ ဟူသမျှတို့သည် တိုင်းသူပြည်သားများ ထံမှသက်ဆင်းစေရမည်။ထို့ပြင်၎။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏တိုင်းသူပြည်သားမှန်သမျှသည် လူမှုရေးရာ၌၎င်း၊ စီးပွါးရေးရာ၌၎င်း၊ နိုင်ငံရေး၌၎င်းတရားမျှတစေလျက်၊ အဆင့်အ
တန်းအခွင့်အရေး ဥပဒေသက်ရောက်မှုတို့တွင် ဆူကြုံနိမ့်မြင့်မရှိပကတိတူညီစေရမည့်အပြင်၊ တရားဥပဒေနှင့်သော်လည်းကောင်း၊အများပြည်သူတို့စောင့်စည်းအပ်သော အကျင့်သိက္ခာနှင့်သော်လည်းကောင်း မဆန့်ကျင်သမျှ လွတ်လပ်စွာကြံစည်ပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ ယုံကြည်ပိုင်ခွင့်၊ ဘာသာတရားကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်၊ ဝတ်ပြုပိုင်ခွင့်၊ ပရိယေသနရှာမှီးပိုင်ခွင့်၊ စည်းရုံးပိုင်ခွင့်၊ ပြုမူဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်တို့ရရှိတည်မြဲစေရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတွင် အခိုင်အလုံသတ်မှတ် ထားရှိစေရမည်။ထို့ပြင်၅။
ဤဖွ့စဲည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် လူနည်းစုများအဖို့ လုံလောက်သောကာကွယ်ချက်များ ထည့်သွင်းပြဌာန်းထားရှိစေရမည်။ထို့ပြင်-
လေတို့ ကို အချုပ်အခြာ စိုး မိုးအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လည်းကောင်း၊ တရားဓမ္မနှင့်တကွ ပြည်ထောင်ချင်းချင်းဥပဒေအရစောင့်ထိန်းထားရှိစေရမည်။ထို့ပြင်၇။
ရာဇဝင်တွင်ထင်ရှားခဲ့သော ဤမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ကမ္ဘာတွင်မိမိ၏ဂုဏ်ကျက်သရေနှင့်လျော်စွာ ရသင့်ရထိုက်သောအဆင့်အတန်းသို့ရောက်
ရှိစေရမည့်ပြင်၊ လူ သတ္တဝါတို့၏တိုးတက်ရေးနှင့် ကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်ဝရေးတို့ကိုတာဝန်အလျောက် စေတနာဖြင့်အစွမ်းကုန်ဖြည့်စွက်ထမ်းရွက်ရကာ ပြည်ထောင် အချင်းချင်းဆိုင်ရာ တရားဓမ္မနှင့် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာကို အခြေခံပြု၍ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးရှေးရှုလျက် နိုင်ငံတကာတို့နှင့်မိတ်ဝတ်မပျက်တဘွဲ က်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကိုခိုင်မြဲ သော အဓိဌာန်ဖြင့်စောင့်ထိန်းတော့အံ့။
စန်းယုက ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်တော်လှန်ရေးနေ့ ဆနေရပါမည်။
မိန့်ခွန်းပြောဆိုရာတွင် “ငါတုိ့ တပ်မတော်သည်ပြည်သူလူထု ဘက်မှ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ပူးပေါင်းကူညီလုပ်ကိုင်
ျွဲီတက်နေစဉ်တွင် ထားရှိရမည့်ပဋိညာဉ်မှာ ဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။ ပြည်သူလူထုသည် မိမိတို့အားအ - လွတ်လပ်သောတိုင်းပြည်၏ ပြည်သူ့တပ်မတော်တို့တွင် ကြီးနှင့် လက်တခ -ပြည် သ လူထူအုတွ င်းမှာနေသည်။ စားအသောက် ၊ အ၀တ်အထည် ၊ နေထိုင်ရန်အိပ်ယာ ၊မမာ ပြည်သူ့ စစ်သားကောင်းများ၏ သွင်ပြင် လက္ခဏာများကား တစ်မူထူးခြားရပါမည်။
(က) တပ်မတော်ကို လူတန်းစားသစ်တစ်ရပ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်း -ပြည်သူလူထုဆန္ဒကိုဖြည့်စွမ်းနေသည်။ တည်ဆောက်သည်မဟုတ် ပြည်သူလူထု၏ ချွေးနည်းစာဖြင့် -ပြည်သူလူထုအား ကိုးစားယုံကြည်သည် ။
ွဲ ဆာင်ရွက်နေသည်ဟုထည့်သွင်း လူတန်းစားအသီးသီးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားပေသည်။ -ပြည်သူလူထုနှင့်လက်တေ ဖော်ြ ပခဲေ့ လသည် ။ ဤမည် သောအသိတရား ၊ လက်ခံ ထို့ ကြောင့်တပ်မတော်သည် မိဘပြည်သူကိုကိုယ်စားပြုရပေ ကျင် သ့ုးံ ရမည် သ့ဘောထားတို့ကိုနိုင်ငံရေးအသိက စေ့စော် မည်။ ၎င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားလုံခြုံမှု စသည်တို့ကိုကာကွယ် လှု ပ ရ်ှားပေး၏။ ယင်းနု ငိင်ေံရးအသိ မှာပင် နိုင်ငံရေးအရည် ပေးရပါမည်။ တပ်မတော်သည် ပြည်သူလူထု၏ အရှင်သခင်
မကျန်းလျှင် ဆေးဝါးကုသပေးရန် ဆေးရုံတို့ကိုအခမဲ့ အသုံး ပြုခွင့်ပေးထားပါသည်။ ထို့ပြင်လည်းပြည်သူလူထုသည် တ ရင်းတနှီးချွေတာစုဆောင်းထားသော မိမိတို့ချွေးနဲစာများ ထဲ မှ တစ်လတစ်ကြိမ်သုံးစွရဲန် ရဲဘော်များ၏ အဆင့်အတန်း အလိုက် သတ်မှတ်ပေးကမ်းသေးသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူ လူထုသည် ရဲဘော်များ၏အနန္တကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ပေသည်။ ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးမစွပ်ရာ ထိုကျေးဇူးများကို ရဲဘော်များ
မဟုတ် ၊ ပြည်သူလူထု၏ စေသည့်ကျွန် ထွန်သည့်နွားကဲ့သို့ အချင်းကို သွတ်သွင်းမွေးမြူပေးလေ၏။ ပြည်သူ့စစ်သား သည် ပြန်လည်ဆပ်ရန် နည်းလမ်းများကို ခဲရာခဲဆစ် စဉ်း ထားရာနေ စေရာသွားရမည် ။ လူထု၏အကျိုးအတွက် ကောင်းများသည် ပြည်သူလူထုနှင့် ကင်းကွာ၍ မနေစေ စားနေစရာမလို။ အထက်ဖော်ပြပါ ပြည်သူလူထုအတွင်း လူထု ၏ခိုင်းသမျှကို မငြိုမငြင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးရမည့် ကြောင်း။ ပြည်သူလူထုအတွင်းမှာနေ၍ပြည်သူလူထုနှင့်သေ မှာနေ၍ ပြည်သူလူထုဆန္ဒကိုဦးထိပ်ထားပြီး ပြည်သူလူထု
ွဲ ဆာင် ဆန္ဒကိုဖြည့်စွမ်းလျှက် ပြည်သူလူထုအားကို ကိုးစားယုံကြည် ကိရိ ယာပစ္စည်းတစ်ခုပမာသာဖြစ်သည်။ (ခ) ထို့ကြောင့်ပင် အတူရှင်မကွာ ၊ ဆင်းရဲအတူ ချမ်းသာအမျှ လက်တေ ရွ ကေ် နရပါမည် ။ ပြည် သ လူထူ၏ုဆန္ဒ က ဥိုီး ထိ ပ ထ်ား၍ ဖြည့် ကာပြည်သူလူထုနှင့် လက်တွေဲ ဆာင်ရွက်နေလျှင် ပြည်သူလူ လျှင် ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဗိုလ်မှူးချုပ် စွမ်းပေးနိုင်မည်။ နည်းလမ်းများကိုအမြဲတမ်းတွေး တောကြံ ထု၏ကျေးဇူးသစ္စာကို တုံ့ပြန်ရာရောက်ပါသည် ။
စစ်ဆိုတာ ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ် ပြည်သူကိုနှိပ်ဆက်ဖို့မဟုတ်ဘူး
တပ်မတော်သားများသို့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော ၏ပန်ကြားချက် (တပ်မှူးတပ်သားပြောစကား (၁)မှ) ဗိုလ်ချုပ်ဟာ လွတ်လပ်ရေးကို လက်နက်နဲ့ တိုက်ယူ ဖို့လိုတယ်လို့ သဘောပေါက်လာတော့ ခြားတိုင်းချစ် ပြည်ချစ် ခေါင်းဆောင်များ နဲ့စုစည်းပြီး ဗမာ့တပ်မ တော်ကိုတည်ဆောက်တ့တဲ့သဲူပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့စိတ်နေ
ကံကြမ္မာရဲ့သတို့သမီး မိုးသည်းထန်နေတဲ့ ထိုတည အညိုးကြီးစွာ ပစ်ချနေတဲ့ မိုးကြိုးပစ်သံတွေကြားမှာ ငိုရှိုက်သံ သဲ့သဲ့လေး ကြားလိုက်ရတယ် .... စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် အဲဒီအနားကိုအပြေးကပ်သွားတဲ့အခါ မိန်းမပျိုလေး တစ်ယောက် ဘ၀ပြေးလမ်းမှာ ခြေခေါက်လဲလို့HIV စွကဲပ်နေပြီတဲ့ ....။
စိတ်ထားဟာ အလွန်ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ
သူ့အဖေက စစ်သား စစ်မြေပြင် အသွားမှာ
တိုင်းပြည်ကိုနှစ်အနည်းအငယ်အတွင်းမှာစည်းရုံးသိမ်း သွင်းနိုင်သူဖြစ်ပါတယ် ဒါ့ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အခြေခံ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်နဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ယခုခေတ် တပ်မတော်သားများ အပါအ၀င် ဗမာပြည်သူအားလုံး လေ့လာ အတုယူသင့်ပါတယ်။ တပ်မတော်သားများ ကိုလည်းပြည်သူသာအမိ ပြည်သူသာအဖ၊ပြည်သူကို
တိုင်းပြည်တာဝန် ထမ်းဆောင်လို့ သေရတာ မြတ်ပါတယ်လို့ ခံယူထားတဲ့ အဖေ ဆေးပင်စင်သမားများ အိမ်ခန်းမှာ မထားနိူင်တဲ့ဆိုတဲ့ စာရွက်လေးကို ကိုင်ကာ အခုတော့ကြိတ်မနိူင်ခဲမရ နဲ့ ဒေါသပုန်ထနေပြီ ..။ နှစ်(၂၀) တာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် အကျိုးအမြတ်ကဒုက္ခိတဘ၀နဲ အဆုံးသတ်
ရန်သူလိုသဘောမထားကြပါနဲ့လ့ပို န်ကြားလိုပါတယ်။
ဘယ်နေရာကို ပြေးကပ်ရမလည်း ဆိုတာစဉ်းစား
ဗမာပြည်ရဲ့ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲအ
လက်ထဲက ရွှေတမူးသားနဲ့ သူရဲကောင်း တံဆိပ်ကြီးကို
တွက် တစ်ခန်းတစ်ကဏ္ဍက ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ သတင်းဌာန အသီးသီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ တပ်မတော်သားများနဲ့ပြည်သူလူထုကြားနားလည်မှုရ အောင်ယုံကြည်မှုရအောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တနွ်း ချင်ပါတယ်။
ငေးကာကြည့်ရင်း သူ့မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေ စီးကျလာပြီလေ ……..။ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီကြောင့်ရန်ကုန်ကိုရောက် လှိုင်သာယာလယ်ကွင်းထဲမှာ အိမ်ဆောက် မဖြစ်စလောက်ငွေကြေးလေးနဲ့ ဓနိမိုးနဲ့ ထရံကာ ကြမ်းခင်းလေးတောင် မလောက်ငခဲ့ဘူး… လေတိုက်ရင် ယိုင်နဲ့ နေတဲ့ထိုတဲလေးမှာ မိသားစုဘ၀
ပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့ကြရတယ်.. သေနတ်ကိုင်တာကလြွဲ ပီး အခြားအရာဆို ဘာမှမသိတဲ့ စစ်သားကြီး ဒုက္ခိတ အဖေ
ထလော့မြန်မာ၊ အိုမြန်မာတို့ - တိ့ရွုာတို့မြေ၊ တို့ရွာမြေ၀ယ် ဆန်ရေစပါး၊ များလည်းများ၏ - များပါလေလဲ၊ တမွမွဲနှင့် ဆင်းရဲကာသာ၊ ကာလကြာလျှင် ယာစကာမျိုး၊ တညှိုးညှိုးနှင့် ပုထိုးမြင့်မောင်း၊ ကျောင်းကြိုကျောင်းကြား လှည့်လည်သွားလျက် မစားလေရ၊ ၀မ်းမ၀၍ ဆွမ်းမျှမတင်နိုင် ရှိမည်တည်း။ ထလော့မြန်မာ၊ အိုမြန်မာတို့ 
အရပ်တကာလည်ကာ အ၀တ်လျှော်ခဲ့တဲ့ အမေ သူတို့ နှစ်ယောက်ပေါင်းလို့ ပေါက်ဖွားလာတာ သားသမီးက ခြောက်ယောက် ထမင်းဆိုတာ မနပ်မှန်လို့ ဆန်ပြုတ်သောက်ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေက များလာခဲ့ပြီ ။ အကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ ကျမ တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ ရလို့ အလုပ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အချိန် စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေစေဖို့ မလည်မ၀ယ်နဲ့ အမေ ဈေးသည် လုပ်ခဲ့တယ် ။
တိ့ရွုာတို့မြေ၊ တို့ရွာမြေ၀ယ် ရေချိုသောက်ရန်၊ မြစ်ချောင်းကန်နှင့် - သီးနှံချိုပျား၊ များလည်းများ၏ များပါလေလဲ၊ တမွမွဲနှင့် - ဆင်းရဲကာသာ၊ ကာလကြာလျှင် မြင်သာမြင်ရ၊ မစားရ၍ - လောကပြိတ္တာ ဖြစ်မည်တည်း။ ထလော့မြန်မာ၊ မြန်မာထလော့ အားမပျော့နှင့်၊ မလျော့လုံ့လ
မညီမျှတဲ့ ၀င်ငွေကြောင့်မောင်နှမတွေ စာသင်ကျောင်းကို ကျောခိုင်းစွန့်ခွာ မောင်လေးက ဒုတ်တချောင်းနဲ့ အမှိုက်ပုံပေါင်းများစွာကို ထိုးဆွ သူလိုချင်တဲ့ အရာကို ရှာဖွေတတ်ခဲ့တယ်..။ အငယ်နှစ်ယောက်က ပန်းကောက်
သူကစ၍၊ ငါကအားလုံး လက်ရုံးမြားမြောင်၊ ဉာဏ်မြားမြောင်နှင့် စွမ်းဆောင်ကြလေ၊ ဆောင်ကြလေလော့ ဤမြေဤရွာ၊ ဘယ်သူ့ရွာလဲ ? ဤယာစပါး၊ ဘယ်သူ့စပါးလဲ ? ထားလော့တာဝန်၊ ပွန်လော့လုပ်ငန်း ဉာဏ်ရှေ့ပန်း၍ တစ်ဝမ်းတစ်စိတ် ညီစေသတည်း။
ထမင်းနပ်မှန်ဖို့ အားလုံးကြိုးစားကာ ထောက်ပံ့ပေးထားခဲ့ကြတယ် ။အလကား မနေလိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ရန်ကုန်မြို့အနှံ့ လျှောက်သွားပြီး အလုပ်တခု ရဖို့ အရေးကိုကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမယ့် ဘာအမြီးမှာ မပါတဲ့ကျမ အတွက် အလုပ်တခုရဖို့ သိပ်ကို ခက်ခဲခဲ့ပါတယ် ကားမစီးနိူင်လို့ လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတာ ခိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကားတာယာ ဖိနပ်
ငွေပိုမပါလို့ ရေငတ်တာတောင်ဝယ်မသောက်နိူင်တဲ့ဘ၀ ရေအိုးစင်တွေ့တိုင်း သာဓုခေါ်မိတာ အမှန်ပါဘဲ ။ ဆိုးဝါးတဲ့ ကံကြမ္မာ မုန်တိုင်းကနှိပ်စက်တာ အားမရလို့ အခု အဖေ ဆေးရုံကို ရောက်နေခဲ့ပြီ ။ ငွေမပါရင် မကြည်ဖြူတဲ့ အသိုင်းတခုက ကျမတို့ကို ငြူစူစွာ ဆက်ဆံပြခဲ့တယ် ။ စိတ်ညစ်လို့ လမ်းထွက်လျှောက်ရင်း အဖေ့အတွက် စဉ်းစားကာ မျက်ရည်ကျခဲ့ကြတာ အခါခါပါဘဲ..။ ဒီလိုနဲ့ လူတစ်ယောက်ကကျမနောက်ကို လိုက်လာရင်း သူပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် တကိုယ်လုံး ထူပူသွားပေမယ့် သေချာစဉ်းစားဖို့ ခွန်အားမရှိခဲ့ဘူး သူပေးတဲ့ ငွေကြောင့် အဖေ့ရောဂါ မပျောက်ခဲ့ရင်တောင်..ခက်ခဲနေတဲ့လက်ငင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိူင်တာ အမှန်ဖြစ်လို့ ကျမငြင်းဆန်နိူင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး ။ လောကဓံရဲ့ ရိုက်ပုတ်ချက်ကြောင့် ကျမဘ၀ လမ်းဘေးမှာ အပျိုရည်ပျက်ခဲ့ရတယ် ။ အဲဒီက ရတဲ့ ငွေလေးနဲ့အဖေ့အတွက် ဆေးပြေးဝယ် တာဝန်ကျ ဆရာဝန်ကို မျက်နှာချိုသွေးလို့ ဆေးကုပေးဖို့ တောင်းပန်ခဲ့ရတယ် ။ ကံဇတ်ဆရာရယ် ကစားတာရပ်ပါတော့လုိ့ အခါခါတောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့် ဒုက္ခိတ အဖေကို ရောဂါပေါင်းစုံက နှိပ်စက်လို့ ကျမရဲ့ ဘ၀ ထပ်မံ နစ်မွန်းခဲ့ရတယ်။ ပညာရှင် ဖြစ်စေလိုတဲ့ အဖေဆန္ဒ ပြည့်မြောက်လို့ ချီးမြှောက်တဲ့ ရင်ခွင်ပိုက်ထားကာ ကြည်နူးနေတဲကျမအဖေ…ကို သူ့သမီးမိုက် ကလပ်ကို ရောက်တာ မသိပါစေနဲ့…။ ချမ်းသာသူတို့ စည်းစိမ်ခံဖို့ အရေး ကျမရဲ့ ဘ၀လေးကို ပေးဆပ်နေတာကို ရသတဏှာကြောင့် သူတို့မှာ ချိုမြနေပေမယ့် ငွေကြေးအတွက် ဝေဒနာကို ပြေးဖက်နေရတဲ့ ကျမတို့ဘ၀ကို တချက်လောက်တော့ ကိုယ်ချင်းစာ ကြည့်စေချင်တယ်.. .။ ဒီလိုနဲ့ ကျမ အသွေးအသားဈေးသည်ဘ၀ကို ခြေချကာလို့ ကျင်လည်ရာက ကုမရတဲ့ဝေဒနာ စွကဲပ်လာခဲ့ရတယ် ။ အားလုံးကို အနှစ်ချုပ်လို့ ပြန်စဉ်းစားတိုင်း အသုံးမကျတဲ့ အုပ်ချုပ်မှုပုံစံ စနစ်ကြောင့်ကျမတို့ မျိုးဆက်သစ်တွေရေတိမ်နစ်ခဲ့ရပြီလေ……..။ အချိန်တန်လို့ လူသားဘ၀သေကြရမှာ အမှန်ဖြစ်ပေမယ့် ဒီလိုဘ၀ကြီးနဲ့ အဆုံးသတ်ရတာ ဘယ်သ့မှူာ အပြစ်ရှိလည်း သေချာစွာ စဉ်းစားပေးပါလို့ နောက်ဆုံးဆန္ဒ အနေနဲ့ တင်ပြေပေးပါ အစ်ကိုရယ်……….တဲ့…..။ မင်းပြောသမျှကို စာပန်းချီချယ် မင်းခံစားချက် အစစ်ကို ထုတ်ပြလို့ ရင်နာစရာ ကဗျာတပုဒ် အဖြစ်ငါတင်ပြရင်း …. အို……. မိန်းကလေးရယ်……… နောင်တချိန်လူသားဘ၀ မင်းပြန်ရခဲ့ရင် …….. အခုလို အဖြစ်အပျက် မကြုံတွေ့ပါစေနဲ့လုိ့ ၀မ်းနည်းဂရုဏာကြောင့် မျက်ရည်တွေစိုရွှဲစွာနဲ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
"တပ်မတော်သာအမိ တပ်မတော်သာအဖ" မှသည် "ပြည်သူသာအမိ ပြည်သူသာအဖ" ဆီသို့
အောက်ခြေ အရာရှိ၊ အကြပ်၊
အစဉ်အလာဖြစ်သွားပြီး မိန့မ်နာခံချင်ဘူး၊ စစ်စည်းကမ်းဥပဒေကို မလိုက်နာချင်ဘူး။
အဆင့်ဆင့် အမိန်ပေးကွပ်ကဲမှုစနစ်နဲ့ စစ်စည်းကမ်းလိုက် အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက် အရမဟုတ်ဘဲ ဝမ်းရေး
နာရေးဘက်မှာ ချိနဲ့သွားမှာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ တပ်အုပ်ချုပ် အတွက် စစ်မှုထမ်းရတဲ့ နအဖတပ်လို အခစားတပ်မျိုးအ ကွပ်ကဲရေးမှာ အမိန့်မနာခံမှုနဲ့ စစ်စည်းကမ်း ချိုးဖောက် တွက် ဒီအချက်ဟာ ပိုမှန်တယ်။ သွေးထွက်အောင် မှန်တယ်
မှုတွေ ဖြစ်လာတတ်လို့ဖြစ်တယ်။ ယခင်က တပ်တွင်းမှာ ယူ လိ့ေုတာင်ပြောနိုင်တယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတိုင်မီ ပါလီမန်ဒီမို
နအဖစစ်တပ်မှာ လူများရင်ပြီးရောဆိုပြီး ကလေးကအစတွေ့ ရာလူဆြွဲ ပီး စစ်သည်အင်အား များအောင် ဇွတ်အတင်းအဓမ္မ
ဂျီလှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် ခုလိုခွဲလိုက် ရင်းလိုက် စုစုစည်း ကရေစီ အစိုးရလက်ထက်ကဆိုရင် တပ်တွင်းအောက်ခြေ စည်းအရေးဆိုတာမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူး။
အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်၊ တပ်သားများရဲ့ စားဝတ်နေရေး
ဟာ အပျံစားကြီး မဟုတ်ပေမယ့် လက်ရှိ နအဖအစိုးရ ဆုဆောင်းနေတယ်။အရာရှိအင်အားစုဆောင်းရေး မှာလည်း တပ်တွင်းဒါဘာဆွေးနွေး ပွဲတွေမှာသာ တဦးချင်းထင်မြင် ထက်တော့ သာတယ်ဆိုတာသေချာတယ်။ အဲဒီတုန်းက ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ အရင်က စစ်တက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့် ချက်၊ မကျေနပ်ချက်တွေ တင်ပြတာမျိုးရှိခဲ့တယ်။ ဒီလို အောက်ခြေစစ်မှုထမ်းတွေ၊ သူတို့ရဲ့သားမယားတွေ တပ်အ ကို တစ်နှစ်မှာ ဗိုလ်လောင်း(၄၀၀)လောက်ပဲ ရွေးချယ်ခဲ့ တင်ပြရာမှာလည်း တင်ပြသူကို သီးခြားခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး ပြင်ထွက်ပြီး ထင်းခုတ်၊ မီးသွေးဖုတ်၊ အုတ်ဖုတ်၊ ပန်းရံလုပ် ရာက ခုနောက်ပိုင်း နှစ်စဉ်အင်အား (၂၀၀၀) ကျော် လက် နောင်ရင်းလိုက်၊ခွလဲိုက်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဒီလိုဆွေး နွေးပြော စတဲ့ အလုပ် မျိုးတွေနဲ့ ဝင်ငွေရှာရတာမျိုးတွေ မရှိခဲ့ဘူး။ ခံနေတာကိုပဲကြည့်ပါ။ အဲဒီတော့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ ဆိုတာမျိုး မလုပ်ဖို့ ခြိမ်းခြောက် အကျပ်ကိုင်တာမျိုးတွေ တပ်သားတယောက်လစာ (၈၂) ကျပ် (လို့မှတ်မိနေတယ်) တွေအများကြီးရှိလာရတယ်။ တိုးတက်များပြားလာတဲ့ အရာ လုပ်လေ့ရှိတယ်။ တင်ပြဆွေးနွေးတဲ့ ရဲဘော်တွေဟာ တပ် သာဖြစ်ပေမယ့် အထိုက်အလျောက် အသက်ရှုချောင်တယ်။ ရှိ/စစ်သည်တွေကို စွမ်းရည်ထက်မြက်လာအောင် တပ် တွင်း စစ်ထောက်လှမ်းရေးရဲ့ စောင့်ကြည့်မှုကိုလည်း ခံကြရ ဒီနေ့လို ယူနီဖောင်း ဝယ်ဝတ်ရတာမျိုးလည်းမရှိဘူး။ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီး (၄) ရပ်နဲ့ ကျား တယ်။ ဒီနေ့ ခွလဲိုက် ရင်းလိုက် အစု အဝေးနဲ့အရေးဆိုလာ သက်တမ်းအ လိုက် စောင်၊ ခြင် ထောင်၊ ယူနီဖောင်း၊ ဖိနပ် ကန်ပေးဖို့ အခက်အခဲဖြစ်လာတယ်။ မကြာသေးမီက အပစ် တာတွေဟာ တပ်တွင်းမှာ ဒါဘာ ဆွေးနွေးပွဲမရှိတာ၊ ဒါမှမ စတာတွေကို အချိန်မှန် လဲပေးတာ ရှိတယ်။ ရပ်အဖွ့တဲခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဟောင်း တ ဟုတ် လိုအပ်သလောက်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိတဲ့ ဒါဘာ ဦးနဲ့ နအဖတပ် အောက်ခြေ အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်၊ တပ် ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်မပေးတာ ကိုပြတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ သားများအရေး ဆွေးနွေးဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီအပစ်ရပ်အဖွဲ့အ အတွက် ဘာအကျိုးသက်ရောက်မှုမှမရှိတဲ့ ဒါဘာ ဆွေးနွေး
ရင်းတွေက အောက်ခြေ အကြပ် တပ်သားတွေဟာ နေ့စဉ် အကြပ် တပ်သားများရဲ့ အရေးဆိုနည်း သဏ္ဌာန်သစ်ဖြစ် လိုလိုထွက်ပြေးနေကြတယ်။ တပ်ပြေးမရှိတဲ့ တပ်ရင်း၊ တပ် တယ်။ တချိန်တည်းမှာ နအဖ အနေနဲ့ တပ်ကို ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင်
စည်း ခေါင်းဆောင်ရဲ့နယ်မြေနဲ့ ဆက်စပ်နယ်မြေတ၀ိုက်မှာ ပွဲတွေအပေါ် ယုံကြည်မှုမဲ့ရာက ထွက်ပေါ်လာတဲ့၊ အတိုင်း နအဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်း (၉၀) ကျော်ရှိတယ်။ အဲဒီတပ် အတာတခုအထိ အများလက္ခဏာဆောင်တဲ့ အောက်ခြေ
ပြေးမရှိတဲ့ နေ့ရယ်လို့မရှိဘူး။ နေ့စဉ်လိုလို တပ်ရင်းတခုမ ကိုင်ရေးအတွက် အခက် အခဲတွေရှိလာနေပြီ ဆိုတာကိုပြ ဟုတ်တခုကပြေးနေကြတာဖြစ်တယ်။ နေ့စဉ်ပျှမ်းမျှတပ်ပြေး တဲ့ ရှေးဦးဖော်ပြချက်လည်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုတပ်တွင်းအောက် အရေအတွက်ဟာ
ခြေ အကြပ် တပ်သားများရဲ့ စားဝတ်နေရေး အာမခံချက်
လက်နက်ခဲယမ်းပါ ယူပြေးတယ်။ တချို့က လက်နက်မဲ့ပြေး မဲ့မှုကြောင့် တပ်တွင်း မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ တပ် တယ်။ တကိုယ်တော်ပြေးသူတွေရှိသလို (၂) ယောက် (၃) ကို အနီးကပ် ကွပ်ကဲရတဲ့ စု ရင်း ခွဲ စတဲ့ အောက်ခြေ
ယောက် အစုနဲ့ပြေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ တချို့က နီးစပ်ရာ အရာရှိတွေမှာလည်း အခက်အခဲတွေ ကြုံလာရတယ်။ တပ် နယ်စပ်ဒေသတွေကို ပြေးတာရှိသလို မိမိအရပ်ကိုပြန်ပြေး တွင်းစားဝတ်နေရေးပြဿနာတွေကို ဆိုင်ရာသို့တင်ပြပေးပေ ကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ လွတ်သူရှိသလို ပြန်ဖမ်းမိသူတွေ မယ့်လည်း ထိရောက်တဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမှုမျိုးတွေ လည်းရှိတယ်။ ပြန်မိရင်တော့မသက်သာဘူး၊ အကြီးအ မရှိဘူး။
ကျယ် နှိပ်စက်ခံကြရတယ်။ လက်နက်မဲ့ပြေးသူ ပြန်မိရင် အောက်ခြေ အကြပ်တပ်သားတွေရဲ့ စည်းကမ်းချိုး ဖောက်မှု တပ်မှာပြန်အမှုထမ်းရတယ်။ လက်နက်နဲ့ ပြေးသူကိုတော့ (ဥပမာ … နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး လောင်းကစားမှု၊ ခွင့်မဲ့တပ်ပြင် အတင်းလိုက်တိုက်တယ်။
ပြန်မိရင်တော့ ပစ်အသတ်ခံရ ထွက်မှု၊ အမိန့်မနာခံမှု၊ မူးယစ်ရမ်းကားမှု) များကို တွေ့ တယ်။ ထိုင်းနယ်စပ်က အပစ်ရပ်အဖွဲ့တခုရဲ့နယ်မြေမှာ စ တဲ့တိုင် အမိန့်စည်းကမ်းနဲ့ အရေးယူဖို့ ဝန်လေးနေကြတယ်။ ခန်းထိုင်တဲ့ နအဖတပ်ရင်းတချို့ဆိုရင် နေ့ခင်းဘက်မှာ ရဲ မသိယောင်၊ မမြင်ယောင်ဆောင် နေရတာမျိုးတွေ ရှိလာ ဘော်တွေကို လက်နက်ဖြုတ်ထားတယ်။ ညဘက် ၇ နာရီ တယ်။ အမိန့်စည်းကမ်းနဲ့ အကျပ်ကိုင်မယ် ဆိုရင်လည်း ထိုးမှ လက်နက်ပြန်တပ်တယ်။ မိမိနယ်မြေအတွင်း ခရီးတို အန္တရာယ်များတဲ့ တုန့်ပြန်မှုမျိုး ခံရမှာကို စိုးရိမ်လာကြတယ်။
ရိက္ခာထုတ်သွားရတဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း ရဲဘော်တွေကို လက် လက်နက်တွေ ကိုယ်စီကိုင်ထားတဲ့ လူအုပ်ကြီးကို ကွပ်ကဲရ နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်မပေးဘူး။ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ အကြပ် တယ်ဆိုတာ လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ ပြောချင်တာက လက်ရှိ ကြီး၊ အကြပ်ငယ်တွေလောက်သာ လက်နက်ကိုင်ဆောင် နအဖတပ်မှာ တပ်ရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ အဆင့်ဆင့် အမိန့်ပေး ခွင့်ပြုတယ်။ ထွက်ပြေးရင် လက်နက်ပါမသွားအောင် ကြို ကွပ်ကဲမှုစနစ်နဲ့ စစ်စည်းကမ်းဥပဒေဆို တာတွေဟာ သိသိ တင်ကာကွယ်တဲ့ သဘောဖြစ်တယ်။ တပ်ပြေးအများစုဟာ သာသာ ယ်ိုယွင်းလာနေပြီဆိုတဲ့ အချက်ကိုဖြစ်တယ်။ စစ် လူပျိုလူလွတ်တွေဖြစ်တယ်။
အိမ်ထောင်သည်ရဲဘော်ကတော့ တပ်တွင်းနေထိုင်မှု ဘ၀ ကို စိတ်ပျက်တဲ့တိုင် ဇနီးသားမယားတွေအတွက် နောက်ဆံ တင်းနေတာကြောင့် ကျိတ်မှိတ်ခံနေကြရတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အတွင်းမှာ ခွဲလိုက်၊ ရင်းလိုက် တပ်မှထွက်ခွင့်တောင်းမှုတွေ၊ ရဲမွန်နဲ့ မှော်ဘီမှတပ်ရင်းအချို့လိုစုကြေးငွေတွေ ပြန်ထုတ် ပေးဖို့ ရင်းလိုက် လက်မှတ်ထိုး အရေးဆိုမှုတွေ လူသိရှင် ကြားဖြစ်ပွားလာတယ်။ စစ်တပ်တတပ်မှာ အဲဒီလို အစုလိုက် အဝေးလိုက်
ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုအစုအဝေးနဲ့ အရေးဆိုမှုတွေဟာ စစ် တပ်သဘောအရပြောရင် လက်နက်မဲ့ပုန်ကန်မှုတမျိုး ဖြစ် တယ်။ ဒီလိုအရေးဆိုမှုမျိုးကို စစ်တပ်တတပ်အနေနဲ့ ဘယ် တုန်းကမှ ခွင့်ပြုရိုးထုံးစံမရှိဘူး။ အကြောင်းကတော့ ဒီလို
ဘာတွေလဲ။ အကျယ်ချဲ့ရင် အများကြီးပြောစရာ ရှိပေမယ့် အဓိကအားဖြင့်
ရင်ဘတ်ကဒဏ်ရာ မွေးကတည်းကပါလာတာမို့ တမျိုးရယ်တော့ထင်ကြမယ်.. မြန်မာပြည်မှာလူဖြစ်တာကိုငယ်ငယ်ကတော့ ကျေနပ်ပီတိဂွမ်းဆီထိခဲ့တယ်ငယ်ငယ်က တုိ့ တွေပြောခဲ့ကြတယ်အီသီယိုးပီးယားတဲ့ သူတို့ တွေကိုကြည့်ပြီးသနားခဲ့တယ်ခုတော့သိလိုက်ပြီ…… ငါ သနားရမယ့်သူကို… အဲဒီသူကငါကိုယ်တိုင်ဆိုတာကို ခုမှသိခဲ့ရတယ်…ငါ့ကိုယ်ငါမကျေနပ်လို့ အိပ်ယာထက်မှာ ကြိတ်ငို ငါတစ်ယောက်ထဲလို့ထင်ခဲ့တယ်နားလေးနဲနဲ စွင့်လိုက်တော့အလို..ဒို့ နိုင်ငံတစ်ခုလုံး ငိုကြွေးနေတာပါလား..ဘာလို့ပါလိမ့်ဆိုတာ မေးကြည်ချင်တယ် ဒါပေမယ့် ငါကိုယ်တိုင်ကကော ရယ်ပြုံးခဲ့ရဘူးလား ဆိုတာပြန်တွေးကြည့်တယ် သူတို့ ဘက်ကရပ်တည်ပေးမယ့် အာမခံချက်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူး ငါကိုယ်တိုင်ကော အာမခံချက်ရှိလို့လားမှန်တာလုပ်ပြီး မှန်တဲ့အတိုင်းမပြောရဲကြသူတွေ မှားတာတွေလုပ်နေပေမယ့် ကောင်းစားနေကြတဲ့သူတွေ ငါကြားဖူးတာလေးပေါ့မကောင်းတဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာ ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းသူတွေ ကြီးပွါးတယ်တဲ့ ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တော့မသိဘူးရိုးသားစွာရှာဖွေတဲ့ သူတွေ ထမင်းမငတ်ရုံဆိုတာပဲငါသိတယ်မင်းလည်း မင်းမိသားစုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦး သူတို့ တွေဘာတွေပြောနေကြလဲတကယ်တမ်း ပြည်သူလူထုလိုလားတောင့်တတာ ဘာလဲဆိုတာမင်းလည်းသိမှာပါဒါကိုတို့တွေ လျစ်လျူမရှုထားသင့်ဘူးတို့တွေလက်ထက်မှာ
အာမခံချက်ရှိရေး (အထူးသဖြင့် အောက်ခြေအရာရှိ၊ အရာ
ခံ၊ အကြပ်၊ တပ်သားများ) တို့ပဲဖြစ်တယ်။ စစ်မှုထမ်း များရဲ့
ကွပ်ကဲမှုနဲ့ အမိန့န်ာခံမှု၊ စစ်စည်းကမ်းဥပဒေ စတာတွေကို
ဒို့ တွေဟာလည်း နောင်တစ်ချိန်မှာအသုံးမကျတဲ့
အာမခံနိုင်ဖို့ တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်။ ဆိုလို
တာက ထမင်းမဝဘဲ၊ စားဝတ်နေရေး ထိုက်သင့်သလို အာ မ,မခံဘဲ ဘယ်စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားမှ စစ်မတိုက်ချင်ဘူး၊ အ
အလုပ်မှာလည်းတူရမယ် ။ အကျိုးမှာလည်းတူရမယ် ။ ရည်ရွယ်ချက်မှာလည်းတူရမယ် ။ အဲဒါမျိုးကိုမှ ညီညွတ်ရေးလို့ ခေါ်ထိုက်တယ်။
ပြည်သူ့အကျိုးကို ရှေ့ရှု မှ ပြည်သူ့ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့
“အကျင့်စာရိတ္တဆိုတာ လူတစ်ယောက်အတွက် အရင်းအနှီး “စစ်သားဆိုတာ တခါတလေမှာ ငွေတွေသောင်းနဲ့ သိန်းနဲ့ချီ တစ်ခု၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းသူဟာ အရင်းအနှီးရှိသူလို ပြီးဆုံးရှုံးသွားလည်း အပြုံးမပျက်ဘူး။ တခါတလေကျပြန်
ဖြစ်နေပြီး အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းသူကတော့ အရင်းအနှီး တော့ ပိုက်ဆံတစ်ကျပ်အတွက် အသက်ပေးပြီးကာကွယ် မဲ့သူလိုပဲ” ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး အေးမော် ရေ-၁၂၇၉ (DSA တယ်။ အဲဒါစစ်သားစိတ်ပဲ” ဗိုလ်မှူး စိုးလှိုင် ရေ-၁၃၄၅ 22nd ) ( ၂၀၀၂ ခုနှစ် ထောက်ပံ့ရေးရေယာဉ်-၆၀၈ နစ်မြုပ် (DSA 26th ) (လက်ရှိ ဗိုလ်မှူးကြီး၊) ရာတွင် ရေနစ်သေဆုံးသွားသူ)
“စစ်သည်တစ်ဦး တပ်ထဲဝင်ချိန်မှာ အမြင့်ဆုံးအသက်ကန့် ချင်တဲ့ စေတနာထားပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းအစပြုတဲ့ သတ်မှုက ၂၅ နှစ်ဆိုတော့ ၁၀ နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး အချိန်မှာပဲ အောင်မြင်ဖို့တစ်ဝက်သေချာနေပြီ။” ဗိုလ်မှူး ချိန်မှာ သူ့အသက် ၃၅ နှစ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ တပ်ကထွက် စိုးပိုင် ရေ-၁၃၆၁ ( DSA 27th ) (၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ တပ်က ချင်တယ်ဆိုရင် ထွက်ခွင့်ပြုသင့်တယ်။ အသက်ကြီးသွားရင် အနားယူသွားသူ) သူ့အတွက်အပြင်မှာ စီးပွားရှာဖို့အခွင့်အလမ်း နည်းသွားပြီ။ နောက်ပြီး စစ်မှုမထမ်းချင် တော့တဲ့သူကို တပ်မှာဆက်ပြီး ထားတာဟာ
( DSA 24th ) (၂၀၀၂ခုနှစ်မှာတပ်ကအနားယူသွားသူ)
“ပြဿနာတစ်ရပ်ကြုံတွေ့ရချိန်မှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အား နည်းချက်ကိုခုတုံးလုပ်ပြီးသူ့ကိုနာလန်မထူနိုင် အောင်ချောင် ပိတ်မထားသင့်ဘူး။ သူကိုယ်တိုင် ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ဖြေ ရှင်းလာအောင်ထွက်ပေါက်ပေးရမယ်။” ဗိုလ်မှူးကိုကိုကျော် ရေ-၁၃၇၈
“ဒီအချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က သတင်းထုတ် အထက်မှာဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ အရာရှိတွေဟာ ကျနော့်စစ်သက်ွဲ့ဖူးသော တပ်မှူးများ အနက်မှအ ပြန်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင် ဖြစ်ရပ်အနေအထားဘယ်လို ဖြစ်သွားမ တစ်လျှောက် လက်တခ ချို့  ဖြစ် ပါတယ် ။ သူ တိုေ့ ပြာဆိုခဲ့သော စကားများ၌ထင်ဟပ် လည်း။ ခုတော့ တစ်ဘက်လူတွေကို ပါးစပ်ပိတ်ခိုင်းထားပြီး
သူတ့အို လိုကျ သတင်းစာတွေမှာ သမိုင်း ကိုညာချင်တိုင်း ပေါ်လွင်နိုင်သော ပင်ကိုယ်စိတ်နေ သဘောထား တစ်စွန်းာပါ။ ညာနေကြတာပဲ။” (ဒီပဲရင်းကိစ္စအပြီး ၁-၆-၂၀၀၃ ရက်နေ့ တစ်စကို လေ့လာ အကဲဖြတ်နိုင်ရန် ဖော်ပြပေးလိုကတ ထုတ်အစိုးရသတင်းစာပါဖော်ပြချက်များကို
လားဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုပြီး ပြည်သူလူထုရဲ့ ရွေးကောက်တင်မြောက်မှုနဲ့ ပြည်သူ့ အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းရဲ့ဘယ်ဝန်ကြီးဌာနမဆို ပြည်သူ လူထုရဲ့ သက်သာချောင်ချိလွယ်ကူ ချောမွေ့စေရေးကိုသာ ရှေ့ရှုဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အမည်ခံပြည်သူ့အစိုး ရသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနဟာ နိုင်ငံ တကာမှ မရှိခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ အများပြည်သူကို မိုဘိုင်း ဖုန်းတွေ လည်းအကြိမ်ကြိမ်အမျိုးမျိုးရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ထက်မကတယ်လီဖုန်းအခွန်ခတွေ၊မီတာခတွေကိုကောက် ချင်သလိုကောက်၊မြှင့်ချင်သလိုမြှင့်နေတာလည်းတရားနည်း လမ်းမဲ့ပါပဲ။ခုလည်းကိုယ်တိုင်မဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အများ ပြည် သူရဲ့
ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးဖို့တာစူ နေပြန်ပါပြီ။ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးဟာ ပြည်သူလူထုကိုကိုယ်စားပြု တဲ့ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံအစိုးရတရပ်အနေနဲ့ လုပ်သင့် မလုပ်သင့်၊ လုပ်ခွင့်ရှိမရှိ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ယုတ်စွအဆုံး တယ်လီဖုန်းခွန်၊ စည်ပင်ခွန်၊ မီတာခွန်အခွန် ကောက်တာမျိုးကအစပြည်သူ့အစိုးရသာစစ်မှန်ရင်ပြည်သူ လူထုရဲ့သဘောတူညီမှု တစုံတရာမပါဘဲ၊ လုပ်ရိုးထုံးစံမရှိပါ
သည်။) ဗိုလ်မှူး ဌေးနိုင် ရေ-၁၃၄၂ ( DSA 26th ) (လက်ရှိ
ဗိုလ်ချုပ်မြင်သော နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသော ကိစ္စတိုင်းအလိုအလျောက် ဖြစ်လာမည်မဟုတ်။
ဖြစ်လာနိုင်မှုများ အပေါ်တွင်သာ မျှော်လင့် အားထားနေ၍မရနိုင်၊ ကျွန်တော်တို့သည် ကျွန်တော်တို့၏
အောင်မြင်ရေးအတွက်သာမက အနိုင်မခံရရေး အတွက်ပါ ကျွန်တော်တို့၏ စွမ်းအား ၊လုံ့လ၊ အင်အားနှင့် ပြင်ဆင် မှုအပေါ် ယုံကြည်အား ထားရမည်။ မိမိ၏အားကောင်းချက် အားနည်းချက်၊ မိမိ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်၊ အ မျိုးသားရေး လုပ်ငန်းစဉ်၊ ရုပ်အခြေခံဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်၊ ကတ္တားပိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်တ့ကိုို ကောင်းစွာသိနားလည်သူ၊ မိမိ၏ အားကောင်းချက် အားနည်းချက်တို့ကို ကောင်းစွာ သိလျက်၊ မိမိနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်၊ မိမိပတ် ၀န်းကျင်မှအချက်အလက်တို့ကို ကောင်းစွာသိလျက် ဤအ သိဥာဏ်ကို အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်အောင်
“ဥာဏ်ပညာထက်မြက်ခြင်း”ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြခြင်းဖြစ်၏။ သဘာဝအားဖြင့် ဥာဏ်ပညာထက် မြက်လာမှု၊ ပါရမီခံကြောင့် ဥာဏ်ပညာထက်မြက်လာမှု ဆိုသည်မှာမရှိ။ ကျွန်တော် မယုံကြည်၊ ဤစကားကို အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးထုတ်ဖေါ်ခဲ့ကြသည်။ “ဒုက္ခခံနိုင်သောကြီးမား သည့်စွမ်းအင်” “ဥာဏ်ပညာ ထက်မြက်သူ ဆိုသည်မှာ တဘက်လူကို အငိုက်ဖမ်းတတ်သူ” စသည်တို့ ဖြစ်သည်။ အနှစ်သာရ အားဖြင့်ဆိုလျှင် လူဆိုသည်မှာ-သူ့ပတ်ဝန်း ကျင် အင်အားများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး သူ့ဘာသာသူ တည်ဆောက်နိုင်သည့် စွမ်းအင်အလိုက်သာသူ့ဘ၀၊ သူ့ ကံ၊ သူ့သမိုင်း၊ သူ့ကံကြမ္မာကို ဖန်တီးမည်ဖြစ်သည်။
''ရည်ရွယ်ချက် ကြီးမားသော ဆောင်းပါး'' အပိုင်း(၁) စည်းလုံးခြင်းဟာအင်အားပါ။ ထင်းစည်းချောင်းကြီးကို ဆုပ် ကိုင်ပြီး ချိုးပြလို့မရတဲ့အကြောင်း သားတွေကို ပြနေတဲ့ အဘိုးကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကကျောင်း သင်ခန်းစာမှာတွေ့ခဲ့ရတာ အခုထိမမေ့နိုင်အောင်ပါပဲ။ တစ် ယောက်အားနဲ့ ယူသော်မရ၊ တစ်သောင်းအားနဲ့ယူသော်ရ ၏။ သဲပွင့်တစ်ပွင့်ချင်းပေါင်းလိုက်တော့ သဲသောင်ပြင် ၊ရေ တစ်စက်ချင်း ပေါင်းလိုက်တော့သမုဒ္ဒရာပြင်၊ရေများရေနိုင်၊ မီးများမီးနိုင်၊ပြည်သူတင်းမင်းမခံနိုင်ပါ။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ သိက္ခာရှိဖို့၊ တည်ငြိမ်ဖို့၊ တန်းတူအခွင့် အ ရေးရရှိဖို့၊
အင်အားဟာ မဖြစ်မနေလိုအပ်စမြဲပါပဲ။ Global power ၊ Super Power ၊ Highper Power၊ Neo Power တွေ တည်ဆောက်နေကြတာလည်း အားလုံးအမြင်ပါပဲ။ ဒီအင် အားတွေဟာ စည်းလုံးခြင်းကမတည်ဆောက်ရင်
wyfrawmfomtrd wyfrawmfomtz qdkvdk hyg
စည်းကမ်းမရှိတဲ့စစ်တပ်ရှိနေမယ့်အစား အဲဒီစစ်တပ်မရှိတာကမှ တိုင်းပြည်အတွက်ပိုကောင်းတယ်(ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း)
ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြည့်တယ်ဆိုတာကလည်းခပ်ညံ့ညံ့တရုတ်လက်နက် တွေနဲ့
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ အာဏာရရှိခဲ့သူအာဏာရှင်တွေ ဖြည့်ဆည်းတာမို့ တိုင်းပြည်ရော၊ တပ်မတော်ပါ မိအေးနှစ်ခါ
စာမျက်နှာ(၃)အငိုတိတ်ဖို့မှ... ဒဏ်ခတ်ခြင်းခံရရင်ဖြင့် တို့ကျခဲ့တဲ့ သွေး ၊ ချွေး နဲ့ မျက်ရည်တွေဟာ အလဟသဖြစ်ကြရင်ဖြင့်
ဟာစည်းလုံး ခြင်းကရမဲ့အင်အားကို ကြောက်ခဲ့ကြတယ်။ နာခဲ့ရပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် အရိုးစွခဲ့တဲ့Devided In Rules “အားနည်းသူ ကိုနိုင်၊ အားသာသူကိုရှုံး” သွားမယ်ဆိုတဲ့ မပျောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျားသေ အသက်သွင်းတော့ လူသား အယူအဆကို
ဒို့ တွေဟာ ဒီခေတ်ကိုကျော်လွှားခဲ့ကြပါလျက်ကြိုးစားခဲ့ကြပါလျက်နဲ့ သမိုင်းမှာဖျောက်မရတဲ့အမည်းစက်အဖြစ်
ရပြီးတဲ့နောက် ပါတီဂိုဏ်းဂဏတွေ ကွဲစေခဲ့တယ်။ ကွခဲ့တဲ့ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပဲ ကျင့်သုံးနေခဲ့တယ်။ တစ်ချိန် ဘီ ဂိုဏ်းဂဏတွေကို စုစည်းရမဲ့အစား သွေးထိုးမြှောက်ပင့်လုပ် အိုင်အေ၊ ဘီဒီအေ ခေတ်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော် ခဲ့ကြတယ်။ ပုံစံအသီးသီးနဲ့ ဒေသအသီးသီးကိုပြန့်ကွသွဲား ဟာ အင်မတန်ရိုးစင်းပါတယ်။ မြင့်မြတ်သန့်ရှင်းလှပါတယ်၊
ကျန်ရစ်ခဲ့ရလိမ့်မယ် ရယ်သံကိုလိုလားလို့ အပြုံးပန်းကိုဆင်မြန်းစေချင်လို့ ဒို့ တွေဟာကြိုးစားကြရမယ့်အချိန်ပါ
စေခဲ့တယ်။ တစ်စစီဖဲ့ထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့အပြီးတိုင် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံမှု၊ တစ်ဦး အပေါ်တစ်ဦး ရဲဘော်ရဲ
ချေမှုန်းပစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေး စနစ် ဘက်စိတ်ရှိမှု ၊ စွန့်လွှတ် စွန့်စားမှုတွေနဲ့ ပြည့်လျှမ်းနေခဲ့ ကိုပဲ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကြီး တစ်ခုလို ကိုင်ဆွခဲ့ကြတယ်။ တယ်။ ပြည်သူလူထုကိုပဲဦးစားပေးရပ်တည်ခဲ့တယ်။ စေ့စေ့ မဆလ လက်ထက်ကျတော့ ဘာထူးသေးလဲ၊တိုင်းရင်းသား တွေးကြည့်ရင် ဒါတွေဟာ စစ်အာဏာရှင် တည်ဆောက်လို
ငါ ရယ်သံတချို့တော့ကြားတယ်... သာယာတဲ့ရယ်သံမဟုတ်ဘူးပျက်ရယ်ပြုတဲ့ရယ်သံ လှောင်နေတဲ့ရယ်သံတွေရယ်ပါ
လူမျိုးစုတွေကိုဘာသာရေး၊ လူမှုရေးတွေနဲ့ ပိုင်းခြား၊ စော် သူတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေပဲ မဟုတ်လား။ ဒီလို တပ်မ
တုိ့ တွေကိုအုပ်ချုပ် ထင်ရာကိုလုပ်ဖို့
ဘွားစော်ခံ နယ်ရှင်တွေကိုလည်း ပဒေသရာဇ် လက်ငုတ် တော်မျိုးက ပြည်သူတွေကိုဆန့်ကျင်ဖို့ ၊ ပြည်သူတွေကို နှိပ်
ဆိုပြီးတူးထုတ်၊ သီးခြားမျိုးနွယ်စုလေးတွေကို အယူသီးသူ စက်ဖို့ ၊ ကိုယ်ထင်ရာလုပ်ဖို့ ၊ မဖြစ်စေနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် လူမျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူအဖြစ်သတ်မှတ်၊ သွေးနှော စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ဒါတွေကို အကွက်ကျကျနဲ့ ပျက်စီး ရေးစီမံကိန်းတွေ ရေးဆွ၊ဲ ခြိမ်းခြောက်အပြတ်ချေမှုန်းစနစ် စေခဲ့ပြီး ပြန့်ကျဲသွားတဲ့ အပိုင်းအ စတွေကိုကောက်စား တွေနဲ့ သွားခဲ့တော့ စည်းရုံးရေးလည်းမရ အင်အားလည်း နိုင်အောင် “အင်အားကို ပြန့်ကွေဲ စတစ်စစီကို ၀ါးမျိုစား” ဆို
လည်သူဝါး ပြီးအစိုးရအာဏာဟာ ဒို့ ပြည်သူတွေကိုလှောင်ရယ်ဖို့လားရယ်လို့တောင် တွေးမိတယ်သူတို့ရဲ့လှောင်ရယ်သံတွေကြားမှာ ငိုကြွေးချင်းကိုတိတ်တိတ်လေးခိုးလုပ်လို့
မရှိ၊ နိုင်ငံရဲ့ပကတိဟာ အရိုးရင်းပဲကျန် တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားခဲ့ တဲ့ နည်းဗျူဟာကို ကျင့်သုံးခဲ့တယ်။
ရတယ်။ မဆလလည်းပြိုကွ၊ဲ (၈၈၈၈) ဒီမိုကရေစီ မြစ်တွင်း လည်းသွေးချောင်းစီး၊
“တပ်မတော်အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည်အင် အားရှိမည်” ဆို ပြီးကြွေးကြော် ၊ တပ်မတော်ကို အင်အား ရှိအောင်လုပ်
ငါ့အတွက်တော့မဟုတ်တော့ဘူး နောင်လာမယ့် ငါတို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ပေါ့
ရမယ်ဆိုပြီး အသည်းအသန် အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ကြိုး
ငါဒို့ရဲ့ ဒီနေ့လုပ်ရပ်ဟာ နက်ဖန်မှာသမိုင်းပဲ ဒီသမိုင်းမှာ ဒို့တွေဟာ
နိုင်ငံတကာ သံတမန်ရေး ထိုးစစ်နှင့် တတိယ အင်အားစု
ပွဲနဲ့လွှတ်တော် အကြောင်းကို VOA ရေဒီယိုသတင်းဆောင်းပါးကဏ္ဍတွေထဲမှာ ကြားလိုက်ရလို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန်မြို့မြန်မာသံရုံးမှာ သွားသတိရမိပါတယ်။
ငါတို့ ရဲ့ အားအင်တွေကိုလည်း
စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးဌာနမှာလုပ်ဖူးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ မှတ်ချက်ကတော့
ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး စည်းရုံးပေါ့ကွာ၊ ဟိုအမျိုးသမီးနဲ့ Compare လုပ်ဖ့”ို ဆိုတာပါ။ ဟိုအမျိုးသမီးဆိုတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆိုလိုတာပါ။ဝါရှင်တန်မှာ အဲဒီအချိန်တုန်းက
ငိုနေတဲ့ မျက်လုံးတွေကို အငိုတိတ်စေဖို့ ဒို့ တွေဟာ မျက်ရည်ကို သွေးနဲ့အစားထိုးကြရမယ် သွေးသက်သေ သာမှန်ခဲ့ရင်
တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မြန်မာသံအမတ်ကြီးဦးလင်းမြိုင်ကသူ့ရဲ့အစ်ကိုဦးကျော်မြိုင်နဲ့အမေရိကန်မှာ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချ
ဒို့ စိတ်ဓါတ်တွေ သန်ခဲ့ရင်
တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီး ပါမောက္ခတယောက်ရဲ့ ဆက်သွယ်ပေးမှုကြောင့် ဦးသန့်မိသားစုဝင်များ၊ ဖဆပလခေတ် ဝန်ကြီး
ဟောင်းတဦးရဲ့သားများကို အဆက်အသွယ်ရခဲ့ပါတယ်။ အလားတူ ရန်ကုန်မှဆက်သွယ်ပေးမှုကြောင့် အမျိုးသားခေါင်း
ဒို့ ရဲ့ လက်ထဲမှာပါ………….
ဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏သားကြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဒီယေဂိုမှာနေတဲ့ ဦးအောင်ဆန်းဦးနှင့်ဇနီးတို့ကို နအဖစစ်အစိုးရက အချိတ်အဆက်များရခဲ့ကြတယ်။ နအဖ၏ ပြည်တွင်းပြည်ပ သံတမန်ထိုးစစ် (နိုင်ငံတကာဆက်
ဆံရေးကိုထိုးဖောက်ခြင်း) နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ် များကို အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အကြံအစည်ကို သတိထားဖို့လိုပါမယ်။ လူဆိုတာကတချိန် တုံးက ရွှေထီးဆောင်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်များကို မမေ့နိုင်ကြသလို နည်းနည်းလေး ပင့်မြှောက်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ အထင်ရောက် တတ်ကြတာကိုး။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို ရန်ကုန်လွှတ်ပြီးပြုစုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ထင်ထားတာ ထက်တောင် စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံပြနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ကြည့်ပြီးပြုံးမိတယ်။ သူတို့ကတော့ သိမ်းသွင်းခံလိုက်ရပြီဆိုတာမရိပ်မိကြပါဘူး။ သူတို့သာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကယ်တင်မယ့် တကယ့်လူစွမ်းကောင်းတွေလို့ အ ထင်ရောက်စေပါတယ်။ အခုဆောင်းပါးမှာ အဲဒီမိသားစုဝင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂမှာ စစ်အစိုးရရဲ့ အသုံးချခဲ့ပုံကို အနည်းငယ် ဖော်ပြလိုပါတယ်။ နအဖခေါင်းဆောင်တွေဟာ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီအချိန်အထိ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ဆိုတာကို ကောင်းကောင်း နားမလည်ကြသေးတာအမှန်ပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်မယ်၊ ဘယ်သူ့ဂရုစိုက်ရမလဲ ဆိုတဲ့ လူမိုက်စိတ်ဓာတ်မျိုး ထားကြပြီး နိုင်ငံတကာမှာ သူတို့စစ်အစိုးရပုံရိပ် ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲ ဂရုမပြုကြတဲ့သူတွေပါ။ အထူးသဖြင့် ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ထံမှာရှိနေတော့ အမိန့်နာခံကြရတဲ့ လက်အောက်ခံ ဗိုလ်ချုပ် များအတွက် ဆုတ်လည်းဆူးစားလည်းရှုး ဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီး ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဥပမာ ကလေးစစ်သားစု ဆောင်းတာမျိုး၊ အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားပေး ခိုင်းစေတာမျိုး၊ အတင်းအဓမ္မ ရွာတွေရွှေ့ခိုင်းတာမျိုးတွေကို နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရမလုပ်ရဘူးဆိုတာကိုသူနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ကုလသမဂ္ဂမှာရှိတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ မြန်မာအစိုးရအဆက်ဆ က် လိုက်နာပါမယ်လို့ ထိုးထားတဲ့စာချုပ်တွေက ဘာတွေ လဲဆိုတာသူမသိဘူး။ သိရှိနားလည်တဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကတင်ပြဖို့ ကြိုးစားတော့လည်း လက်မခံဘူး။
စာမျက်နှာ(၄)ကော်လ(ံ ၃)မှ အဆက် ဘူး။ ဒါ့ထက် ဘာလုပ်လုပ်အခွန်အခ၊ အမြတ်အစွန်းထက် ပြည်သူလူထု သက်သာချောင်ချိရေးကိုသာ ရှေ့ရှုဖို့လိုပါ တယ်။ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေထိခိုက်လို့ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြ ချက်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လွယ်ကူချောမွေ့သက်သာ ချောင်ချိ မှုကိုဖျက်ဆီးတာဟာ
ဟုတ်ပါဘူး။ လောကမှာ လူကောင်း၊ လူဆိုးထက်ကို ယုတ် ညံ့တဲ့ လူယုတ်မာဆိုတာ ရှိပါတယ်။ လူကောင်းက ကောင်း တဲ့လုပ်ရပ်ကိုလုပ်မယ်၊လူဆိုးကဆိုးတဲ့လုပ်ရပ်ကိုလုပ်မယ်။ ယုတ်မာတဲ့လူကတော့ ဆိုးတဲ့လုပ်ရပ်ကို လုပ်ရုံသာမကလူ ကောင်းတွေရဲ့ ကောင်းမွန်သာယာအဆင်ပြေမှုကိုပါ ဖျက် လို ဖျက်ဆီးလုပ်တဲ့အထိ နိမ့်ကျဆိုးရွားပါတယ်။ အစိုးရမှာ လည်း
လုပ် တဲ့ အစိုးရကောင်းရှိသလို ၊ ဆိုးတဲ့လုပ်ရပ်တွေလုပ်တဲ့ အစိုးရဆိုးလည်းရှိပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့သက်သာ ချောင်
စာမျက်နှာ (၆) ကော်လံ (၁) သို့
ချိအဆင်ပြေမှုကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်တယ် ဆိုရင်တော့..။ ပြည်သူ့အစိုးရကောင်း ပေါ်ထွန်းလာပါစေ ။
ဦးသန့်ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေဟာလည်း အသုံးအလွန်တည့်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် ဖြုတ်ခံရပြီးတဲ့နောက် ခေတ္တရပ်သွားခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဝါရှင်တန်
တင်ပြ ချက်အရ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားအစိုးရကို ဒီလိုနဲ့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်လောက်ကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့် အရေးကိစ္စ ပြဿနာဟာ ကုလသမဂ္ဂမှာ ပိုပြီးကျယ်ကျယ် လောင်လောင် ဖြစ်လာတော့တယ်။ ဒီပြဿနာတွေကို ရင် ဆိုင်ဖို့
လာတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ စိတ်ဓာတ်က အချင်း ချင်းပြောတာကို လက်ခံလေ့မရှိဘူး။ ကုလသမဂ္ဂက အမေရိ ကန်နိုင်ငံသား
ထိုးဖောက်ခြင်း) မဟာဗျူဟာ ချမှတ်ပြီး နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ စည်းတွေမှာ နအဖကို ထောက်ခံသူ များလာအောင်လုပ် ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပြည်ပရောက် ထင်ရှားပြီး အရေးပါ တဲ့မဟာမြန်မာကြီးတွေဟာ နအဖရဲ့ ပစ်မှတ်များဖြစ်လာခဲ့ ကြပါတယ်။ ဒုတိယ ပစ်မှတ်ကတော့ ပညာတတ်အ သိုင်းအ ဝန်းက မြန်မာလူငယ်များနဲ့ တတိယပစ်မှတ်ကတော့မြန်မာ့ အရေးကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်များ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။ ဦးသန့်ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကတော့ ပထမပစ်မှတ် တွေပါ။ ၁၉၈၈ အရေးခင်းပြီးတော့ ဦးသန့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ ဟာဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေဘက်က
လေးတက်တက်ကြွကြွ လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာတွေရယ်၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဦးသန့်အရေးခင်းမှာ စစ်တပ်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို ပစ်သတ်ထားတာတွေကြောင့် စစ်တပ်ရဲ့ စည်းရုံးမှုကို အ လွယ်တကူမှ လက်ခံပါ့မလားဆိုပြီး အစပထမမှာ စိတ်ပူမိ သေးတယ်။ ခဲ့ပါဘူး။
အရေးပါပုံ၊ မြန်မာပြည်၏ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်အရေး ပါပုံအစရှိတဲ့ ချီးမွမ်းခန်းတွေကို ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ မိ သားစုဝင်တွေအသီးသီး အစိုးရဧည့်သည်တော်တွေအဖြစ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ချီတက်ကြတော့တာပါပဲ။ နအဖကကောင်း ကောင်း သိမ်းသွင်းလိုက်ပုံရပါတယ်၊ ပြန်လာပြီးတဲ့အခါမှာ တော့ စစ်တပ်ကို မုန်းတဲ့စိတ် ပျောက်သွားပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံကို ကယ်တင်မယ့် နအဖ ရဲ့ အကျိုးဆောင်တွေအဖြစ် နအဖ က နိုင်ငံတကာကိုပြောချင်တာတွေကို နအဖကိုယ်စား ပြောပေး နေတာ အခုအထိတွေ့နေရဆဲပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ နအဖ ဟာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်လောက်ကစပြီး ခုနပြောခဲ့တဲ့ မစ္စတာ ဂျိုးဇက်ဗာနာရိဒ် ရဲ့အကြံပေးချက်အရ နှစ်စဉ်ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာ ခံ ကာလဖြစ်တဲ့ သြဂုတ်လကနေ နိုဝင်ဘာလ အတွင်းမှာ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ကနေဒါ၊ ဂျနီဗာနဲ့ ပြင်သစ်က မြန်မာ သံအမတ်ကြီးများဟာ နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂရုံးမှာ လာရောက်
ရောက်လာကြတဲ့ သံတမန်များနဲ့ နယူးယောက်မှာ ရှိကြတဲ့ နိုင်ငံတကာ သံတမန်များကို စစ်အစိုးရအတွက် ထောက်ခံမှု ရအောင်ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားကာ လနဲ့ချီ စည်းရုံးရေး ဆင်း ဆွယ်တရားဟော (Lobby) လုပ်နေခဲ့ကြတာ ယနေ့အ ထိတွေ့နေရဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် နအဖ ကိုယ်တိုင်လုပ်တာထက် သာမန်အစိုးရနဲ့ မဆိုင်တဲ့သူများကလုပ်တာ ပိုပြီး ထိရောက် မှုရှိနိုင်တယ်လို့ အကြံပြုချက်အရ နအဖရဲ့ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ပစ်မှတ်တွေကို စုစည်းပြီး တတိယအင်အားစုကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်လောက်မှာ အကောင်ထည်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကို စည်းရုံးတဲ့အခါမှာ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့် ရဲ့အမည်ဟာ စစ်အစိုးရ အတွက်
ထိုးဖောက်ခြင်း) လုပ်ငန်းကို အကျိုးရှိပါတယ်။ အလားတူ
စည်ရုံးမှု တွေပြန်လုပ်ဖို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ခွင့်ပြုခဲ့ တဲ့အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ တတိယအင်အားစုတွေ ပြန် လည်လှုပ်ရှားခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့် ပြုတ် ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း
တတိယ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေထဲမှာ Myanmar Egress ဟာလည်း တခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် အစော ပိုင်းကာလတုန်းကအနောက်နိုင်ငံက အမျိုးသမီး သံအမတ် တဦးကလည်း
အဓိက အားပေး အားမြှောက်ပြုခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိုသိသိသာသာ ထောက်ခံခြင်း ဖြင့်သူတို့ရပ်
လာခဲ့ကြပါတယ်။ အစောပိုင်းတုန်းက ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင် ရေးနဲ့ဖြွံ့ ဖိုးရေးအသင်း
တွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦး နဲ့ ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦးကိုဘန်ကောက် မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစေတာမျိုးတွေကို Myanmar Egress က ကြားဝင်ပြီး ညှိပေးတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ယမန်နှစ် နိုဝင်ဘာလတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံသို့ နှစ်ရက်ကြာလာရောက် ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူး ကိုယ်စားလှယ် ဗီဂျေနမ်ဘီယားနဲ့ တတိယအင်အားစု တွေ တွေ့ဆုံပြီး သူတို့အမြင်တွေကို တင်ပြတဲ့အထိလည်း ခြေ လှမ်းကျယ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့အရေးကို ကြားဝင်စေ့စပ်ဖို့ ခန့် အပ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် နိုက်ဂျီးရီး ယားက မစ္စတာဂမ်ဘာရီကိုမှတ်မိကြဦးမှာပါ။ သူမြန်မာပြည် ကို ပထမဆုံးမသွားခင်၂၀၀၆ မေ လ မတိုင်ခင်လေးမှာ နယူးယောက်က ကုလသမဂ္ဂရုံးမှာကျင်းပတဲ့ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကျိတ်ဝိုင်းလေးရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာတက်ခဲ့သူ တွေကတော့
မယ့် “မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူ” တွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အရာ ရှိတွေပါ။ ဦးသန့်ရဲ့မြေးလည်း တက်ခဲ့ပါတယ်။ ထူးခြားတာ ကတော့ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မြန် မာ့နိုင်ငံရေးက မေ့ထားလိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ အဆိုကို လူတချို့က တင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ကတော့ ဒါကို နောက်ဆုံးမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါ တယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အရင်ထက် စာရင် နည်းနည်းပြောင်းလဲတာက ရွေးကောက်ပွဲ၊ လွှတ်တော် နဲ့အ စိုးရသစ်ကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့နဲ့ မပြောင်း လဲခဲ့တာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ စီးပွားရေးပိတ်ဆ့မှိုကို ဆန့် ကျင်ဖို့ ဆိုတာတွေပါပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ တီးကွက် အတိုင်း လိုက်ကနေကြရတာပါ။ ကျနော့်အနေနဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ
ပညာတတ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသူတွေ အနေနဲ့ အာဏာရှင်ကြီးရဲ့ အသုံးချခံနေရမှုကို
တယ်။ ရာထူးကြီးသူများ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများ ပြောစကား တွေထက် အခြေခံ စစ်ဖက် အရပ်ဖက် လူတန်းစားတွေရဲ့ စကားတွေကိုလည်း လေ့လာနားထောင်သင့်ပါတယ်။ တ ကယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တယ်ဆိုရင် အစိုးရကိုရောဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေကိုပါ ဝေဖန်ရဲတဲ့ သတ္တိရှိဖို့လိုပါတယ်။ အစိုးရ ဘက်ကချည်း လိုက်ပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့ ပညာတတ် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသူတွေလို့ ယူဆနေကြတဲ့ တတိယအင်အား စုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေကြတယ် လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
လူငယ်တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ လက်ရှိတပ်မတော် လူငယ်တွေဘာကြောင့် စစ်တပ်ထဲ ၀င်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ် သက်ပြီး နည်းနည်းလောက်ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့
ဆိုင်တဲ့ ပညာသည်အုပ်စု ဆိုင်ရာအတန်း (၃) သင်တန်းမ တက်ရခင် သက်ဆိုင်ရာတပ်တွေ မှာခေတ္တ တွဖဲက်နေရ တယ်။ တနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ အုပ်စုကိုဒုတပ်မှူးက ဟောခန်းတစ်ခုထဲမှာ
ခပ်ပျော်ပျော်နေတတ်ပုံရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တတွေကို ညီအကိုလိုရင်းရင်းနှီးနှီးပဲ ခေါ်ပြောဆက်ဆံတယ်။စစ်သည် တွေအားလုံး တစ်ယောက်စီထပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက် ရတယ်။
ကစားဝါသနာပါသလဲ။ ဘာဖြစ်လို့စစ်တပ်ထဲ ၀င်တာလဲလို့ မေးတယ်။ အားကစားကိစ္စမှာတော့ ကိုယ်သန်ရာသန်ရာဖြေ ကြပေမယ့် စစ်တပ်ထဲဝင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောတဲ့နေ ရာမှာတော့ အားလုံးတစ်ထေရာတည်းလိုပဲ “ကိုယ့်ဘ၀တိုး တက်မှုကို ဖြစ်စေလိမ့်မယ်ထင်လို့ဝင်တာ”လို့ ဖြေကြတယ်။ စစ်သည်အားလုံးလိုလိုက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကို ရှေ့ တန်းတင်ပြောလိုက်တဲ့အခါ လူ့လောကအတွေ့အကြုံ နည်း နည်းရှိထားသူတွေက စိတ်ပူပန်ကြတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ကိုတည့်တိုးကြီး ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဟိုအရာရှိများ စိတ်ဆိုးသွားလေမလားပေါ့။
“ဂါရ၀”တရားနဲ့ သတိထားပြီးဆက်ဆံရတာ မဟုတ်လား။ ဒါ ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ထင်ထားသလို ဖြစ်မလာဘူး။ ဒုတပ် မှူးက စစ်သည်တွေပြောသမျှကို ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့နားထောင်နေ တယ်။ တခါတခါ ခေါင်းပါညိတ်လိုက်သေးတယ်။ အားလုံး ပြောပြီးတော့မှ “ရဲဘော်တို့ ကိုယ့်ဘ၀တိုးတက်ဖို့ စိတ်ဝင် စားတာ ကောင်းပါတယ်။ ဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ တော့ဘွဲ့ မရသေးသူက ဘွဲ့ရအောင်ကြိုးစား။ ဘွဲ့ ရပြီးသူက သတ်မှတ်တဲ့အချိန်တစ်ခုစောင့်ပြီးရင် ဗိုလ်သင်တန်းဖြေကြ။ စစ်တပ်ထဲမှာတော့ ဒီနည်းကအကောင်းဆုံးပဲ။ ပုံမှန်တဆင့် ပြီးတဆင့်တက်နဲ့ အရာခံဗိုလ် စောစောစီးစီး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် တော့အသက် ၆၀ ပြည့်အငြိမ်းစားယူတဲ့အခါ ကော်မရှင်ပြန် တမ်းဝင် ဗိုလ်ကြီးဘ၀နဲ့ ပင်စင်ရမယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်အခြေ အနေနဲ့ကိုယ်ချင့်ချိန်ပြီးကြိုးစားကြ။လူငယ်ဘ၀မှာ မျှော်လင့် စရာတွေများတယ်။အသက်ကြီးလာရင်တော့ ရွေးချယ်စရာ တွေနည်းသွားတတ်တယ်။ အဲဒါကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားကြ အုံး” လိ့ေုအးအေးဆေးဆေး
ကျယ်တဲ့လူက တပ်ထဲမှာ ရှားတော့အရှားသား။ ကျွန်တော် တို့
ပညာအရည်အချင်းက အားလုံး ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသား တွေ။ အသက်အရွယ်အားဖြင့်တော့ ၂၃ နစ် ၂၄နှစ် အရွယ် ကဆယ်ယောက်လောက်ရှိတယ်။
သားသုံးဦးလောက်ပါတယ်။ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တက်နေ ဆဲလူတွေပါတယ်။ အချို့ဝန်ထမ်းဌာနတွေမှာ လုပ်ခဲ့ဖူးသူ တွေလည်းပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတစ်ရာလောက်က အသက် နှစ်ဆယ်အောက်တွေချည်းပဲ။ ဆယ်တန်း အောင်ပြီးခါစအ ရွယ်တွေ။ လူငယ်တွေရဲ့ အတွေးက ကိုယ့်ဘ၀တိုးတက် ကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်မှာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြ တာပါ။ ကျနော်တို့အထဲမှာ အများစုက တက္ကသိုလ် ဆက် တက်ဖို့ အခြေအနေ မပြည့်စုံကြပါဘူး။ အဲဒီအချိန်က ပြင်ပ အလုပ်ဆိုတာလည်းအတော်ရှားသေးတာ။ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ တွေ ခေတ်မစားသေးဘူး။ ရေတပ်မှာစစ်မှုထမ်းရင်း ရလာ နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း တွေအတွက် စိတ်ကူး ယဉ်အိပ်မက် ကိုယ်စီနဲ့တပ်ထဲက၀ို င်လာကြတာ။ ရေတပ်ကထွက်ပြီး နိုင်ငံ ခြားသင်္ဘောတက်သွားကြတဲ့ နောင်တော်ကြီး တွေကို အား ကျတာလည်းပါမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တတွေရည်မှန်း
ထားတဲ့အတိုင်း ပေါက်မြောက်ခဲ့သလားလို့မေးရင် အများစု သဘာဝပဲ။ စိတ်မလွတ်လပ်သူတစ်ဦးဟာ လူ့အဖဲ့အွစည်း
ဖြစ်သည်။ သို့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါအချက်များ
မအောင်မြင်ဘူးလို့ ဖြေရမှာပါ။ တပ်ထဲမှာက ကျနော်တို့ အပေါ်မှာ ဘယ်လိုများ အကောင်းမြင်သဘောနဲ့ ဆက်ဆံ
ကိုအသက်ပေး၍ ကာကွယ်စောင့်ထိမ်းရမည့် တာဝန်ရှိသည့်
ထင်ထားသလို ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြခွင့်မရှိဘူးလေ။ အ နိုင်ပါ့မလဲ။ တပ်မတော်ထဲမှာတော့မချစ်သော်လည်း အောင့်
ရည်အချင်းအလိုက် မြှောက်စားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ လက်သင့် ကာနမ်းနေရတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ စခန်းသွားလို့ ကောင်းနေ
မှားယွင်းနေခြင်းဖြစ်သည်ကို တပ်မတော်သားများ သိရှိနား
ရာစားတော်ခေါ်တဲ့ စနစ်ကြီးစိုးတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှု မညီမျှတာ တုန်း။ ကျနော့သိမြင်မိသလောက် ပြောရရင်တော့ ဒီခေတ်
လည်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ထို့အပြင် ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုး
ကြောင့်အခွင့်အရေးတွေလည်းကွာခြားလာတယ်။ ရုန်းထွက် မှာ မျိုးချစ်စိတ်ရှိရမယ်၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး အများအကျိုးသယ်
ဇင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်များသည် ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ်
ဖို့ခက်ခဲတဲ့ အဖြည့်ခံဘ၀မှာ အရက်သောက်ပြီး စိတ်ထွက် ပိုးရမယ် စသဖြင့် ယေဘူယျဆန်ဆန် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်
စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ မိမိတို့ တပ်မတော်သားချင်း ဆိုသည့်
ပေါက်ရှာသူတွေ များလာတယ်။ ဒါတောင် ကျနော်တို့က မရှိတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ကိုတင်းတင်း
သံယောဇဉ်တရားများအရ တပ်မတော်သား မိသားစုများ၏
ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းနော်။ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘဲရောက် ကျပ်ကျပ်ချည်နှောင် မထားသင့်တော့ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။
လာသူတွေ အဖို့ဆိုရင် ပိုပြီးဆိုးမှာသေချာတယ်။ ဘာဖြစ် တကယ်လက်တွေ့မှာလည်း အဲဒီစကားတွေဟာလူငယ်တွေ
ဒါန်းခြင်းများသာဖြစ်သည်။ သို့အတွက် ယခုအခါ ဗိုလ်ကြီး
လု့လိဲဆိုတော့တပ်ထဲမှာ ထက်မြက်မှု၊ ကြိုးစားမှုနဲ့ထိုက်တန် အတွက် အားမဖြစ်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကာအကွယ်ယူ
ဟောင်းနေမျိုးဇင်သည် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်စေလို
မှုကို တိုက်ရိုက်ညီမျှခြင်း ချလို့မရဘူး။ ဒီအနေအထားက တဲ့ ခြုံလွှာတွေလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။ လူငယ်တွေရဲ့ပင်ကိုယ်
ကြောင်းအား သူငယ်ချင်းတစ်ဦးထံ ပေးပို့သည့်စာတွင်ရေး
အခြေခံသင်တန်းမှာကတည်းကသိသာတယ်။ ကျနော်တို့ထဲ စရိုက်မှာကိုက ပရစိတ်တွေ ကိန်းအောင်းနေပြီးသားပါ။ အ
ကသင်တန်းသား တစ်ဦးဟာ စံပြကျောင်းသားဆုကိုဆွတ် ရေးကြီးတာက အတွေးအခေါ်လွတ်လပ်မှုရှိဖို့ကိုပဲ လမ်းဖွင့်
ပုဒ်မ ၃၃ ဖြင့်ယခုအခါ တရားစွထဲားပြီး အင်းစိန်ထောင်
ခူးချင်လို့ သင်တန်းကာလ တစ်လျှောက်လုံး ပြောစရာမရှိ ပေးရမှာ။ တိုင်းပြည်မှာ အရေးကြုံတဲ့အခါ စိတ်လွတ်လပ်မှု
အောင်ကြိုးစားတယ်။ သင်တန်းသားတွေသာမက သင်တန်း ရှိသူတွေကသာ
သည့်မိသားစုများအဆိုအရ သိရသည်ဟု သတင်းဌာနများ
ဆရာ တချို့ကတောင်သူ့ကို ထင်ကြေးပေးထားကြတာ။ တ ဟုတ်လား။ လက်ရှိတပ်မတော်အတွင်း ကျင့်သုံးနေတဲ့ အ
ကယ်ရွေးချယ်တော့ သူမဟုတ်ဘဲ အခြားမသိသာသူတွေထဲ မိန့်နာခံရေးဗဟိုပြု အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အောက်မှာ လူငယ်တွေ ကတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။ အဆင့်တိုး စာမေးပွဲေဖြဆိုမှု ရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့ရွေးချယ်ခွင့်တွေ ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ထင် မှာလည်းဒီအတိုင်းပါပဲ။ တပ်မှာလုပ်ငန်း ဘယ်လောက်ကျွမ်း မိတယ်။ သူ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် နေသားကျလာတဲ့ ခေါင်း ကျင်ကျွမ်းကျင်သူတို့အဓိကထားမေးတဲ့ ပေါ်လစီဆောင်ပုဒ် ဆောင်ဖြစ်သူတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ တွေရွတ်မပြနိုင်ရင် မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူး။ ကျနော့သူငယ် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ
ချင်းတစ် ယောက်ဗိုလ်သင်တန်းဖြေဖို့သွားခါနီးမှာ ဌာနချုပ် ရွက်ပေးနိုင်ပါ့မလား။
G1 သြ၀ါဒပေးလိုက်ပုံက မှတ်သားစရာ။ “မင်းဟိုကိုရောက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးတတ်မြင်တတ် ဖောက်ထွက်ဆွေး ရင်သိပ်ပြီး smart
ဖြစ်အောင်မနေနဲ့။ ငါတို့တုန်းကအရမ်း နွေးလုပ်ကိုင်တတ်သူတွေ
smart ဖြစ်သူတွေ ပြုတ်ကျန်ခဲ့တယ်” တဲ့။ ဟုတ်တယ်.. တွေနဲ့ဝန်ပိမနေစေချင်ဘဲ လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ခြေမှာ ရှင်သန် စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ လိုချင်တဲ့ အရည်အချင်းက ထက် နေစေချင်တာပါ။ လူငယ်တွေအားလုံး
မြက်မှု မဟုတ်ဖူး၊ ခိုင်းသမျှ အမိန့်နာခံရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ လပ်တွေးခေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။ ခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အုပ်စုထဲမှာ ကြည်းတပ် အရာရှိ ဖြစ် သွားတာ(၅)ဦး၊ ရေတပ်အရာရှိဖြစ်သူက (၄) ဦးရှိတယ်။
ပြေးသွားသူတွေရှိတယ်။ ကျန်းမာရေး အကြောင်းပြချက်နဲ့
သူတွေလည်းရှိတယ်။ကိုယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ကိုယ် လျှောက်လှမ်း နေကြတာဖြစ်သလို တစ်ဖက်ကလည်း တူညီတဲ့အခွင့်အရေး ကိုဖန်တီးပေးမထားပြန်ဘူး။ အမှန်ကတော့တူညီတဲ့အခွင့်အ ရေးရှိနေတာတောင်မှ အရည်အချင်း မတူညီမှုကြောင့် အား လုံးတပြေးညီ ဒါပေမယ့်
တော့ကိုယ်ညံ့တာပဲလို့ ဖြေသာတာပေါ့။ ခုနောက်ပိုင်း အ ချိန်တွေမှာ အဲဒီဖြစ်စဉ်လေးကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ လူ ငယ်တွေ
လင်းလင်းပြောရဲတာ ကောင်းတယ်ဗျ။ အဲဒါကို လူကြီးတွေ ကလည်း နားလည်ပေးဖို့ လိုတယ်။ လူတစ်ယောက်တိုး တက်အောင်မြင်တယ်ဆိုရာမှာ သူ့ဘ၀ရဲ့ အနာဂတ်မျှော် လင့်ချက်က မက်လုံး တစ်ခုအနေနဲ့ စေ့ဆော်အားပေးနေ တယ်။ သဘာဝလည်းကျတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို ကြိုဆိုရမယ်။ အားပေးအားမြှောက်ပြုရမယ်။ တစ်ဦးချင်းဖွံ့ဖြိုးမှုကို လူ့အဖွဲ့ အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် သဟဇာတ ဖြစ်အောင်၊ ချိတ်ဆက်မိအောင် တည့်မတ်ပေးဖို့ပဲလိုတယ်။ အတ္တကြီးတယ် ကိုယ်ကျိုး ကြည့်တယ်လို့ မမြင်စေချင်ပါ ဘူး။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ လူငယ်တွေကလည်း လူကြီးတွေရှေ့ မှာအားနာသလိုလို ကြောက်ရွံ့သလိုလိုနဲ့ ကိုယ့်ရင်ထဲရှိရာ ကိုအမှန်မပြောရဲဘဲ ဖုံးကွယ်ထိန်ဝှက်ထား။ လူကြီးတွေက လည်းလူငယ်တွေပါးစပ်ဖျားက အတ္တထက် ပရကိုဦးစားပေး ပြောဆိုတာ တွေသာကြားချင် ဖြစ်နေတဲ့ လူ့အဖွ့အဲစည်းမျိုး မှာတော့ ရိုးသားမှုတွေကွယ်ပျောက်နေပြီးကြာလာရင် လော ကကို မချင့်မရဲဖြစ်တဲ့ အငုံ့စိတ်တွေကြီးထွားလာတတ်တာ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ အနားယူသွားပြီဟု ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ဖွံ့ပါတီ) မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦးက ပြည်တွင်းမီဒီယာတချို့ကို ပြောခဲ့ သော်လည်း အစိုးရသစ်အဖွဲ့ကို နောက်ကွယ်မှ ဆက်လက် ကြိုးကိုင်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော် စစ်ဘက်အသိုင်း အ၀န်းမှ သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၁၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန် မြို့ရှိ ကြံ့ဖွံ့ပါတီရုံးချုပ်၌ ဦးဌေးဦးက ပြည်တွင်းမီဒီယာ တချို့ အား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေသည် အများထင်မြင် ယူဆနေ
နေမင်းသူ သကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ ရာထူးတာဝန်မှ အမှန်တကယ် အနား
တပ်ရဲ့ လက်ရှိအနေအထားတွေအရ မခံနိုင်တော့လို့ထွက် နှုတ်ထွက်သူတွရှိတယ်။ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်စခန်းသွားနေ
ဖြင့်တရားစြွဲ ပီ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်သည် စစ်တက္ကသိုလ်အမှတ်စဉ် (၃၉) မှကျောင်းဆင်းခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် တပ်မ တော်မှအငြိမ်းစားယူခဲ့သည့် တပ်မတော်အရာရှိဟောင်းတစ် ဦးဖြစ်သည်။ ယင်းဗိုလ်ကြီးနေမျိုးဇင်သည် NLD လူငယ်များ ကိုဦးဆောင်ကာ မိမိတို့တပ်မတော်သားများနှင့် တပ်မတော် မိသားစုများ အရေးပေါ်သွေးလို အပ်လာပါက အသုံးပြုနိုင် ရန်အတွက် သွေးအလှူအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်လှုပ်ရှားပြီးရန်ကုန် မြို့ရှိ မင်္ဂလာဒုံစစ်ဆေးရုံ ကြီးတွင် သွားရောက်သွေးလှူ ဒါန်းခဲ့သည်။ ယင်းရှေ့တွင်လည်း နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း သင့်ပြည်သူများအား သွားရောက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ် ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် လပိုင်း အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် တပ်တွင်းအရေးဆောင်းဆိုမှုများဖြစ် ပေါ်လာပြီးနောက် တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးမှ မြေ အောက်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ပေးနေ သူများဟု သံသယရှိသူများကို လိုက်လံဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ရာ တွင် ယင်းဗိုလ်ကြီးနေမျိုးဇင်ကိုပါ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးသွားခဲ့သည်ဟု
အခြေခံဥပဒေ အခန်း ၈၊ ပုဒ်မ ၃၇၆ တွင် စီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသော တရားသူကြီး၏ ချုပ်မိန့်မရရှိဘဲ မည်သူ့ကိုမျှ ၂၄ နာရီထက်ပို၍ချုပ်နှောင်ခြင်းမရှိရဟုပြဋ္ဌာန်းထားသော်လည်း ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးဇင်ကို ဖမ်းဆီးစဉ်က ဖမ်းဝရမ်း မပါ ခြင်း၊ ရက်သတ္တပတ် ၃ ပတ်ကျော်အထိ တရားရုံးမတင်ဘဲ ဖမ်းဆီးထားခြင်းများသည် အစိုးရ နှင့်အာဏာပိုင်များကိုယ် တိုင်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖောက်ချက်ကျူးလွန်ခြင်း
ယူသွားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ပါတီတွင်လည်း နာယက တာဝန်ယူ ထားခြင်း မရှိကြောင်း ရှင်းလင်းပြော ဆိုသည်ဟု ပြည်တွင်း အခြေစိုက် ဧရာဝတီ သတင်းထောက်က ဆိုသည်။ ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးသည်
စစ်ကောင်စီကို ဖျက်သိမ်းကာ ဦးသိန်းစိန် ကို သမ္မတ တာဝန် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ကာကွယ်ရေး ဦးစီး ချုပ်ရာထူးကိုလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ရာထူးမှ အငြိမ်းစား ယူမယူ ကိုမူ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသကဲ့သို့ သတင်း စာများတွင်လည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောဆိုခြင်း မရှိပေ။ နေပြည်တော် စစ် ဘက်သတင်းရပ်ကွက် အဆိုအရမူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏လုံခြုံရေး နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တပ်ကပင် တာဝန်ယူထား ကြောင်း၊ သု့ေိသာ် ကိုယ်ရေးအရာရှိများဖြစ်ကြ သော ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်း၊ ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုးရှိန်နှင့် ဗိုလ်မှူးကြီး မြင့်ကြည် တိ့ကုဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး အနီးတွင် ဆက်လက် တာဝန်ယူနေကြဆဲ ဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရသည်။
တပ်မတော် ဖခင် ချစ်စေချင်(အပိုင်း-၁) ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အေးမြင့် ဒီနေ့တပ်မတော်ရဲ့နိဒါန်းအစပေါက်မြောက် ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ရ တဲ့ မနေ့က တပ်မတော်ကို တိုင်းပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေး ဗိသု ကာ တပ်မတော်ရဲ့မူလ ပထမ ဖခင်အစစ် ဗိုလ်ချူပ်အောင် ဆန်းက ဦးစီးတည်ထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ ငြင်း မရတဲ့ သမိုင်းသာဓကတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းနဲ့အတူ စတင်မွေးဖွားခဲ့တဲ့ တပ်မတော် ကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း အမှူးပြုတဲ့ သူရဲကောင်း အာဇာနည် ရဲဘော် သုံးကျိပ်ဝင်များက ဦးစီးပြီး BIA တပ်မတော်ကို စတင်စုဖွဲ့ခဲ့ကြကာ BDA, BNA (သိ့မုဟုတ်) PBF ရယ်လို့ အဆင့်ဆင့် ပြင်ဆင်စုဖွဲ့ ခဲ့ကြပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး မရမှီကာလ ၁၉၄၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၇) ရက် နေ့မှာကန္ဒီစာချူပ်အရအမြဲတမ်းဗမာ့တပ်မတော်အသွင် ကို ပြောင်းလဲစုဖွဲ့ခဲ့ကြတာ သမိုင်းမှတ်တမ်းမှာ အထင်အ ရှားတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင် ဗိုလ်ချူပ်အောင် ဆန်းစုဖွဲ့ တည်ထောင်ခဲ့လို့လည်း ဒီနေ့တပ်မတော်ကြီးဟာ အဓွန့ရ်ှည်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ တပ်မတော် မှာ အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်၊ တပ်သားများရယ် လို့ တာဝန် များ ထမ်းဆောင်နေကြပြီး လစာ၊ စရိတ်၊ စစ်လက်နက် ပစ္စည်း၊ ရိက္ခာမှ အစ အဆင့်၊ ရာထူးများ ခံစားနေကြရတာ ဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် စစ်ခေါင်း ဆောင်ကြီးများရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်လို့ ဆိုရပါမယ်။ တပ်မ တော်ရှိလို့သာ ခံစားနေကြရတာပါ။ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း တိ့သုာ မစုဖွဲ့ခဲ့ရင် တပ်မတော်ရယ် လို့လည်း မရှိခဲ့နိုင်သလို ရာထူးအဆင့် အာဏာပါဝါ များလည်း ဘယ်လိုမှ ခံစား စံစား နိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာရူး၊ နှာဗူး၊ မြင်းသမားကြီး ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့  မဆလခေတ် (၂၆)နှစ်မှာတောင် တိုင်းပြည်ရဲ့  ကျေးဇူးရှင် ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းကို သိသိသာသာ ပြောင် ပြောင် တင်းတင်း သမိုင်းကနေပြီး ဖယ်ထုတ်မှေးမှိန် စေခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး မတွေ့ခဲ့ရပါ။ မသိမသာ တစ တစသာ မှေးမှိန်စေ ခဲ့ပြီး ဗိုလ်နေ၀င်းကို အမွှန်းတင်မှုသာ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ တပ် မတော်နေ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားစစ်ကြောင်းများစုဖွဲ့ခဲ့ရာ မှာပင် အောင်ဆန်းစစ်ကြောင်း ရယ်လို့ ဂုဏ်ပြုတင်စား စုဖွဲ့ ခဲ့တာ အမှတ်ရနေပါတယ်။ ပစ်ပစ်ခါခါ စွန့်ပယ်ဖယ်ရှားတာ မတွေ့ခဲ့ရပါ။ ရှစ်လေးလုံး သမိုင်းဝင် အရေးအခင်း နောက် ပိုင်းကျမှဘဲ တစ တစသိသာ ထင်ရှားစွာ သမိုင်းမှ ပယ် ထုတ်လာတာ သတိပြုမိပါတယ်။ ဒါထက် ပိုပြီး ရှင်းရှင်းလင်း လင်း ပကတိအရှိအတိုင်း ရေးရပါလျှင် သမီးဖြစ်သူ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံပေါ်မှာထင်ပေါ် ကျော်ကြားလာချိန်ကစလို့ ဖခင်ဖြစ်သူ အပေါ် ပိုပြီး အာဃာ တ တရားကြီးမားစွာနဲ့ မှေးမှိန်ပျောက်ပျက်အောင်ကြံဆောင် လာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီး ပြို ကွချဲူပ်ငြိမ်း ခဲ့ရတာကို အကြောင်းပြုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် က်ို အငြိုးထား မုန်းမာန်ပွားကာ အောက်တန်းကျကျ တြုံ့ပန်တိုက်ခိုက် အပုပ်ချရာမှ စလို့ ကျေးဇူးရှင် တိုင်းပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာ တပ်မတော် မူလ ပထမ ဖခင်အစစ် ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကိုပါ မလိုတမာ သိ သာ ထင်ရှားစွာ ဖျောက်ဖျက်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်နဲ့ သမီးကို ခွဲခြားပြီး မြင်သင့်ပါတယ်။ မဆီမဆိုင် လက်ပံသား ဓါးနဲ့ ချိုင် ဆိုသလို ကျေးဇူးရှင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို ကျေးဇူးကန်းရန် မသင့်ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ တပ်မတော်ရဲ့ မူလဖခင် ဖခင်အစစ် ဖြစ်ရုံသာမကတိုင်းပြည် ရဲ့ အတုမဲ့ ကျေးဇူးရှင်၊ တမျိုးသားလုံး တုနှိုင်း ယှဉ်လို့ မရ တဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဖြစ်သလို တစ်ဦးတည်းသာရှိတဲ့ အမျိုးသား သူရဲကောင်း၊ သမိုင်းမှာ နှစ်ယောက် မရှိနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင် ကြီးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဒီနေ့ တပ်မတော်က မျိုးချစ်
စစ်သည်တိုင်းဟာ မလွမဲသွေလက်ခံရပါမယ်။ သမိုင်း အမှန် ကိုလည်း
သိသူတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း မျိုးချစ်စစ်သည်တိုင်း ပက ကိုယ်တိုင် စစ်သားဘ၀နဲ့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့လှုပ်ရှား ဖြတ်သန်းမှု တိ အမှန်ကိုမြင်ကြရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင် ကာလရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအရ မနေ့က တပ်မတော်နဲ့ ဒီနေ့ ဆန်းရဲ့ သမိုင်းဖျောက်ဖျက်သူ မှန်သမျှကို မဟာရန်သူ အ တပ်မတော်ဟာ
ဖြစ် မြင်ကြရပါမယ်။ ဆန့်ကျင် ချေမှုန်း တုန့်ပြန် သွားသင့် လုပ်နည်း လုပ်ဟန်တွေပါ သိသိသာသာ ကြွဲ ပားခြားနား ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ တပ်မတော်ကို စတင်စုဖွဲ့ခဲ့သူဟာ ဗိုလ် သွားပြီလို့
ချုပ်အောင်ဆန်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်နေ၀င်းပင်လျှင် တပ် ရပ် ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော်မှာ မကောင်းတဲ့ စစ် မတော်ကို စတင် စုဖွဲ့ခဲ့စဉ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အတူ သား မရှိဘူး၊ မကောင်းတဲ့ စစ်ဗိုလ်သာ ရှိပါသတဲ့။ ခေါင်း ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် တစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ဆောင်မှု
ကနေ့မှာတော့ တပ်မတော်ကြီးကို စတင် စုဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ရဲဘော် တာပါ။ စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဦးစီးကွပ်ကဲမှု ကောင်းလျှင်၊ သုံးကျိပ်ဝင်များဟာ နှစ်ဦးသာ အသက်ထင်ရှားရှိနေပြီး အား ကွပ်ကဲမှု အောက်စစ်သည်များလည်း စစ်စည်းကမ်း သေ၀ပ် လုံး ကွယ်လွန်သွားကြရှာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ဗိုလ် ကာ စနစ်တကျ ရှိမှု မပျက်ပြားဘူးလို့ ဆိုစမှတ် ပြုကြပါ ရဲထွဋ်နဲ့ ပြည်ပမှာ ဗိုလ်ကျော်ဇောတို့ နှစ်ဦးသာ သက်ရှိ တယ်။
ထင်ရှား ကျန်ပါတော့တယ်။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့တပ်မ ဆိုကြပါတယ်။ မနေ့က တပ်မတော်မှာ တပ်မှူးများ ကောင်း တော်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် စာရင်းမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇောနဲ့ ဗိုလ် ဖို့ကို အလေးထား သွန်သင် ပဲ့ပြင် ထိန်းကျောင်းလို့ ရွေး မှူးကြီး ရဲထွဋ်တို့ နှစ်ဦးကို ပယ်ဖျက်လို့ မရနိုင်ပါ။ ပွင့်ပွင့် ချယ်တာဝန်ပေးတာ သတိပြုမိ ခဲ့ပါတယ်။ မနေ့က တပ်မ လင်းလင်း ရေးရရင် ဗိုလ်မှူးကြီးရဲထွဋ်ဟာကွန်မြူနစ်ဟောင်း တော်မှာ အရာရှိ၊ စစ်ဗိုလ်တဦး ဖြစ်လာဖို့ မလွယ်လှပါ။ တစ်ဦးဖြစ်သလို ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဇောဟာ လက်ရှိ ကွန်မြူ တပ်မှူး တစ်ဦး ဖြစ်လာဖို့က ပို၍ပို၍ပင် ခက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နစ်ကြီး တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကွန်မြူနစ် တပ်မတော်ကို စတင်စုဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် အမျိုးသား ၀ါဒကိုရော၊ ကွန်မြူနစ် လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုပါ လုံးဝ မနှစ်မြို့ဘဲ သူရဲကောင်းများပင်လျှင်
စက်ဆုပ် ရွ့ရှာံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ ကျေးဇူး လည် စုဖွ့ခဲ့တဲ့ အမြဲတမ်း ဗမာ့တပ်မတော်မှာ အရည်အချင်း ရှင်များ အဖြစ် သူတုိ့ နှစ်ဦးကို အသိအမှတ်ပြုပြီး နားလည် ကန့်သတ်ချက်အရ
မှုပေး လေးစားတယ်၊ တန်ဖိုးထားတယ်၊ မိုက်ရိုင်းစော်ကားမှု သတိပြုမိပါတယ်။ လေ့လာမှတ်သားမှုအရ လည်းကောင်း၊ မပြုနိုင်ပါ။ဒီနေ့တပ်မတော်ကိုဗိုလ်သန်းရွှေ၊ ဗိုလ်မောင်အေး၊ အကြီးအကဲ ဆရာသမားများ ပြန်ပြောပြ၍ သိခဲ့ရသည်မှာ ဗိုလ်ရွှေမန်း၊ ဗိုလ်သိန်းစိန်တို့ စတင် စုဖွ့ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ ပညာအရည်အချင်း သတ်မှတ်ရာမှာ မမီတာမို့ မပါဝင်နိုင် ဘူး။ နအဖတွေက စုဖွဲ့ခဲ့တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံး ခဲ့ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကန္ဒီစာချုပ်အရ ပြန်လည်စုဖွဲ့ခဲ့ကြ ဟာနို့သက်ခံစ့ေို နကြသူတွေသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဗိုလ်သန်း တဲ့ မနေ့က တပ်မတော်မှာ ပညာအရည်အချင်း သတ်မှတ် ရွှေ က မနေ့က တပ်မတော်မှာ ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှ ပါဝင်ခဲ့သလို မှုကြောင့် ပညာတတ် လူငယ်များဟာ အရာရှိ ၂၀၀ ထဲမှာ ဗိုလ်မောင်အေးက ၁၉၅၅ မှာမှ ဗိုလ်လောင်းအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်များထက်ပင် ကိုယ်ပိုင်အမှတ် BC နံပါတ် တာပါ။ ကျွန်တော်လည်း ၁၉၅၅ မှာမှ စစ်သား ဖြစ်ခဲ့ရ များ စောပြီးရကြတာသမိုင်းမှတ်တမ်းများမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူပါ။ထူးခြား ပြောင်မြောက်တဲ့ သမိုင်း အစဉ်အလာ ဘာ လက်လှမ်းမီသမျှ ရေးပြရပါလျှင် ကြည်း-၃၅၀၁ ဗိုလ်လက်ျာ၊ တစ်ခုမှ မရှိကြပါ။ သူလို ကိုယ်လို ပိန်မသာ လိမ်မသာ ကြည်း-၃၅၀၂
သာမန် စစ်ဗိုလ်များသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သမိုင်းဝင် ရှစ်လေး ကြည်း-၃၅၀၄ ဗိုလ်ကျော်ဇော၊ ကြည်း-၃၅၀၅ဗိုလ်အောင်ရွှေ လုံး အရေးတော်ပုံ ကာလ နောက်ပိုင်းမှာမှ အရှင်မွေးလို့ (ယခု NLD ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ကြည်း-၃၅၀၆ ဗိုလ်ရဲထွဋ်၊ ကြည်းနေ့ချင်း ညချင်း ကြီးပြင်းလာတဲ့ သူတွေသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ၃၅၀၇ ဗိုလ်မောင်မောင် (ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း)၊ ကြည်းအထင်ကြီးစရာ ဘာတခုမှ မရှိပါ။ အမဲရိုးမှ ဟင်းအိုး အားမ ၃၅၀၈ ဗိုလ်တင်ဖေ (ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း)၊ ကြည်း-၃၅၀၉ နာ ဆိုသလို တချို့ဗိုလ်ချုပ်တွေက အောင်ဆန်း ဆိုင်းဘုတ် ဗိုလ်အောင်ကြီး (ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း) တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ မမြင်ချင်တာနဲ့ အောင်ဆန်း အမည်ကို မကြားချင် ရတာနဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်ဗလမှာ BC နံပါတ် တော်တော်များ အောင်ဆန်းကို ကျေးစွပ် နေကြတာ မြင်ရ ကြားရလို့ ရင်နာ များ နောက်ကျပြီး ၁၉၅၅-၅၆ လောက်မှ ချောက်မြို့ အခြေပြု လွန်းလှပါတယ်။ တောကြိုအုံကြား လျှိုမြောင်တောင်ကြား အမှတ်(၁၀) တပ်မဟာမှာ တပ်မဟာ ဗိုလ်မှူးအဆင့်နဲ့ တပ် မှာ ကျင်းပတဲ့ ဒီနေ့ တပ်မတော်ရဲ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားမှာ မဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ကြည်ဝင်းရဲ့ ကွပ်ကဲမှု အောက်တွင် သိသိသာသာ အောင်ဆန်း စစ်ကြောင်း ဆိုတာကို ဖြုတ် စစ်မှုထမ်းခဲ့ရရှာပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ COD ကို ဗိုလ်မှူး ပစ်လိုက်လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကန့်ကွက် ပြစ်တင် ရှုတ်ချ အဆင့်နဲ့ ရောက်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်မှူးအဆင့်နဲ့ပင်
လိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီနေ့ တပ်မတော်ရဲ့  အကျည်းတန် အငြိ်မ်းစား ယူသွားခဲ့ရရှာပါတယ်။ တပ်ရင်းမှူးပင် ဖြစ်မသွား အရုပ်ဆိုးလှတဲ့ ကျေးဇူးကန်းလုပ်ရပ်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရေး ရရှာပါ။စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်နေ၀င်းဟာ သူကိုယ်တိုင် အကျင့် သားလိုပါတယ်။လုံးဝ မခံမရပ်နိုင်အောင် နာကျည်းလွန်းပါ ပျက်နေပေမဲ့ တပ်မတော်ကို စစ်သည်တော် ကျင့်ဝတ်များ တယ်။ ဒီကျေးစွပ်တဲ့ လုပ်ရပ်များကို ဒီနေ့ တပ်မတော်ထဲက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားကာ လိုက်နာ စေခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ မျိုးချစ်စစ်သည်တိုင်း ပီပီပြင်ပြင် ဆန့်ကျင် ရှုတ်ချကြရပါ ကျင့်ဝတ်နဲ့အညီ လိုက်နာ လှုပ်ရှားစေဖို့ကိုလည်း ဆော်သြခဲ့ မယ်။ ဒီနေ့ တပ်မတော်ကြီးကို လက်တဆုပ်စာ စစ်အာ သလို ကွပ်ကဲမှု အဆင့်ဆင့်မှ တပ်မှူးများကိုလည်း ကြပ် ဏာရှင်တစ်စုက
အ မတ် ထိန်းကြောင်းစေခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ပွင့်လင်းပြတ်
သုံးပြုနေတာကို လက်ခံ လိုက်လျောဖို့ မလိုအပ်တော့ပါ။ သားမှုအရလည်း “ငါပြောသလိုလုပ်၊ ငါလုပ်သလို မလုပ်နဲ့” သမိုင်းမှန်ကို လေ့လာ ဆန်းစစ်ပြီး မလျော်မကန် မတော် ရယ်လို့ ပြောခဲ့တာ ကြားဘူးနားဝ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော် မတရား ပြုကျင့်လုပ်စားနေကြတဲ့ စစ်သူတောင်းစားတွေကို ရဲ့ သဘောသဘာဝအရ စစ်သည်များဟာ ဦးစီးကွပ်ကဲမှု ဒီနေ့ တပ်မတော်ထဲက ဖြစ်တဲ့ နည်းနဲ့ တွန်းလှန်ဖယ်ရှား တပ်ဗိုလ်၊ တပ်မှူးတို့ရဲ့ စံနမူနာ ကောင်းကို အတုယူအား သန့်စင်သွားကြဖို့ လိုပါတယ်။ မလျော်ကန်တဲ့ လုပ်နည်း ကျကာလိုက်လံလှုပ်ရှားတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲဘော် လုပ်ဟန် အကြံအဖန် အားလုံးကို အံတု တော်လှန်သွားကြဖို့ ဘ၀တုန်းက အရည်အသွေး ပြည့်ဝတဲ့ အထက်အရာရှိ၊ တပ် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မနေ့က တပ်မတော်နဲ့ ဒီကနေ့ ဗိုလ်၊ တပ်မှူးများကို စံထားကာ အတုယူ ကျင့်ကြံအားထုတ် တပ်မတော်ရဲ့
ငါးဆယ်လောက်ပဲအကြောက်တရား ပြင်းပြင်းရိုက်သွင်းခြင်း မင်းရဲ့ အကိုဆိုရင်မင်းမွေးလာတဲ့သားလေးတွေကငါ့တူပေါ့။
နဲ့ စိတ်ဖိစီးခြင်း လူမဆန်စွာ ရက်စက်ခြင်း ဥပဒေမဲ့ခြင်းနဲ့ ငါတူလေးတွေ အနာဂတ် သာယာလှပဖို့ ငါတို့ လိုလူတွေ
ခါနွေဆန်းစ ဒီမတ်လ ရော်ဝါတွေမကြွေနိုင်၊ရွက်သစ် တွေ လည်းမဝေနိုင်၊ ရာသီတွေ ဖေါက်ပြန် အချိန်ခါမဟုတ် မိုးတွေ ရွာ၊ မတ်လကြီးအစောမနက်မှာ မြူတွေဆိုင်းလို့၊ ဟော ကမ္ဘာ ပျက်တော့မယ်လို့တချို့ကပြောကြတယ်။ ဘာလို့ဆို ဂျပန် ပြည်ငလျှင်က ကနဦးနမိတ်တဲ့။ မြန်မာပြည်ရှမ်းတောင် လည်းလာပြီ၊ အိမ်တွေပြိုလို့ လူတွေငိုလို့။ တည်မြဲခိုင် မာပါ တယ်ဆိုတဲ့ မြေကမ္ဘာရေ မကြေငြာပဲ မပျက်စီးပါနဲ့အုံး။ တို့ တတွေ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘ၀လေးတွေ မြင်ခွင့်မရသေးဘူး ၊ တို့ မြန်မာတွေ လွတ်လပ်တဲ့ လူ့ဘ၀မရသေးဘူး။ ခိုင်မြဲ လှ တယ်ဆိုတဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုး တို့နိုင်ငံမှာမချုပ်ငြိမ်းသေး ဘူး၊ မြေကမ္ဘာတောင် နေစရာမရှိတော့အောင် ခြောက်လှန့် ပျက်စီးလာတာ ဘယ်ဟာမှ မတည်မြဲဘူးဆိုတာ အာဏာ ရှင်တို့ သတိမမူမိကြရော့သလား လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၆ နှစ် တာ ကာလတွေတုန်းက တို့မြေဒီမြေမှာ နိပွန်ဘိရုမာ ဘန်ဇိုင်း အသံတွေနဲ့အတူတို့ မြန်မာတွေထဲက
နေချိန်"ငဘ"လိုလူစဉ်မမှီအောင်ဘ၀ပျက်ခဲ့ရသူ မြန်မာတွေ တို့ မြန်မာတွေ လူဖြစ်ရှုံးခဲ့ရတယ်။ မိန်းမတွေ အဓမ္မကျင့် ခံရတယ်။ လူကြီးကလေး မကျန် လက်သည်း ခွါခံသူခံရ။ အ ပြစ်မဲ့ အရမ်းကာရော အဖမ်းခံ အသတ်ခံ အနှိပ်စက်ခံ သူခံရ။ ရေနွေးပူနဲ့လောင်းသတ်တာလည်း ခံရ။ ဘုန်းကြီး ရဟန်းမကျန်နှိပ်စက်ဖမ်းဆီး၊လွတ်လပ်ခြင်း ပျောက်ကျွန်သ ပေါက်ဘ၀နဲ့ညွံမှောင်နစ်အောက်ဘ၀တွေ ပျောက်ခဲ့ ရပါပ ကော.....။"အနီးကပ်ဆုံး ရန်သူကို ချေမှုန်းကြ" "ဗမာပီ ပီ ဗမာ့သွေးကို ပြကြ" ဗိုလ်တေဇ ဦးဆောင်ပြီး ပြည်သူ့ကြား က ပြည်သူ့အား၊ လူထုကြားက လူထုအား၊ ညီညွတ်တဲ့ အားနဲ့ ဖက်ဆစ်တွေကိုချေမှုန်းခဲ့တယ်။ ဗိုလ်တေဇ ခေါ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက
ဖွဲ့ စည်းပြီး ကမ္ဘာတွင်တဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကြီးတွေကို ဆင်နွဲခဲ့တာဟာ
တို့ မြန်မာတွေ သူတပါး အဖိနှိပ်ခံဘ၀ကလွတ်ဖို့ ။ လွတ်လပ် ဖို့၊ တို့မြန်မာတွေ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီနိုင်စွမ်းရှိဖို့ သူ တို့ သူတို့ အာဇာနည်တွေအသက်တွေစတေး ပေးဆပ်ပြီး နှောင်းလူ
တချို့သော စစ်သားကြီးတွေက သေအံ့မူးမူးမှာ ပြောခဲ့တယ် " လွတ်လပ်မှ အမျှဝေပါ " တဲ့။ ဟော အဲဒီ စစ်သား ကြီးတွေလိုပဲ
လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင် သေနက်တွေကို ဆက်ကိုင်ထားတဲ့ ကနေ့ခေတ် ၊ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အာဇာနည် စစ်သားကြီး တုိ့ ရေ
တမျိုးသားတည်းချင်း တနိုင်ငံသားထဲချင်း မုဒိန်းတွေကျင့်၊ လူမျိုးတုန်းမတတ်
မြေမြူပ်အပြီး လိုချင်တယ်တဲ့။ သယံဇာတတွေဆိုတာ လူ လက်တဆုပ်စာ အတွက် ဘိုးဘွားအမွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ နိုင်ငံ့ ရာသီဥတုကြီးလည်းအကျင့်ပျက်လာဒ်စားမှုတွေနဲ့အတူ ဖောက်ပြန်ကုန်ပြီ၊ သစ်တောတွေလည်းကုန်၊ ရေနံဓါတ်ငွေ့ တွေလည်း တိုင်းတပါးအတွက်၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပင်မလုပ်ငန်း ကြီးတွေ စီးပွားရေး ကြီးတွေက ဒီလူ ဒီလူ လက်တဆုပ်စာ လက်ထဲမှာ။ လူထုနဲ့ တိုင်းရင်းသား ထုကတော့ ကိုယ်ပေါ် မှာ အနူဝဲစွဲ ယုံမက အစာအိမ်တောင် အနာတွေ အမာရွတ် တွေနဲ့ လူလိုတွေးခွင့်မရ၊ လူလိုနေခွင့်မရ၊ လူလို မစားရ၊ လူ လို ဘာလွတ်လပ်ခွင့်မှ မရတဲ့ တိရိစ္ဆာန် သာသာ နေရရှာတဲ့ လူဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါတမျိုး မြေကမ္ဘာမှာ ပေါ်ထွက်လာ အောင် မြန်မာမြေက အာဏာရှင်တွေက ပုံသွင်းလိုက်တယ်။ ဘာ သိပ္ပံပညာမှ
အလျင်နဲ့ပဲ ဖန်တီးခဲ့တယ်။ သိပ်တော့မကြာပါဘူး၊ နှစ်ပေါင်း
တိရိစ္ဆာန်သာသာ မင်းအမျိုးတွေ အားလုံး ၀ိုင်းတည်ဆောက်ခဲ့ကြရမယ်လေ။
လူတွေ အခုဆို သန်းခြောက်ဆယ်နီးပါးလောက် ရှိလောက် စစ်သားလေးရေ ရောပေါ့။ အဲဒီ သန်းခြောက်ဆယ် လောက်ကလေ အမွဆဲုံး မင်းတို့
တိုင်းပြည်ထဲမှာ စိတ်ဓါတ်ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာ အရလည်း အ သမုဒ္ဓရာထက် ခနတက်တဲ့ ရေတပွက်ပမာ ဆိုတာလေး နိမ့်ကျဆုံးလို့ တခြား နိုင်ငံသားတွေက သတ်မှတ်ကြတယ် သတိပေးစကားပါးလိုက်မယ်။ စစ်သားလေးရေ ။ မင်းတို့ကို တဲ့။ ဘာကြောင့်ဆို ကိုယ်တွေ ညံ့လို့ ကိုယ်တွေ ခံရတာ ငါတို့ ချစ်တယ်။ ငါတို့ကို မင်းတို့ ချစ်ခင်တွယ်တာ ကာ ကို ရှေးဘ၀ ကုသိုလ်လို့ ယိုးစွတ်ရှောင်လြွဲ ပီး နှောင်းလာ ကွယ်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်။မင်းတို့ဆိုနေကျသစ္စာတွေ ပြောနေ မယ့်သူတွေကို မျက်နှာလွခဲပစ် နေကြသူများလို့တဲ့။ အဲဒီအ ကျ စကားတွေ ငါတို့ ချိုမြိန်စွာ နားဆင်ချင်တယ် ၊ ပီသ ထဲက နည်းနည်းတွေးတတ်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်သာသာ လူဆိုတာ ထက်မြက်တဲ့ မင်းတို့ စစ်ချီသီချင်းတွေဟာ ငါတို့ အသက် ထဲ ငါလည်း တယောက်အပါပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ ။ ငါ့မှာ ကိုကာကွယ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ဓါတ်ထက်သန်ရာအားဆေး ဖြစ် လည်း ဘာမှလူလို လွတ်လပ်ခွင့်မှ မရသေးတာ။ အကျဉ်း စေချင်တယ်။မင်းတို့ကို ငါတို့ မမုန်းဘူး ။ ငါတို့ မုန်းတာက ထောင်တွေထဲမှာလည်း သူတော်စင် သူတော်ကောင်းတွေက ငါတို့ ကို ဥပဒေ မရှိဘဲ နေခိုင်းတာ။ အခု လုပ်ပြနေတဲ့ လူ့ငမိုက်သား ငရဲသားတို့ရဲ့ အဖမ်းဆီး အနှိပ်အစက် ကို ဥပဒေ ဆိုတာကလည်း စစ်သားလေးရေး မင်းတို့ရော ငါတို့ ခံနေရတယ်။ ဖက်ဆစ်တို့ကို တော်လှန်ရင်း အသက်ဇီဝိန် ပါ စစ်ကျွန်ဘ၀ထဲ အရေခွံလဲပြီး ဆက်နေခိုင်းအုန်းမယ့် ဂါ ကြွေ လွင့်ခါနီး စစ်သားကြီးတို့ရေ ကနေ့ ဒီအခြေအနေ ထာတွေ ရွတ်ပြီး မန်းမှုတ် အသက်သွင်း ဖန်ဆင်းဖို့ လုပ်နေ တွေ အမှန်တရားတွေ ကြည့်ပြီး လွတ်လပ်မှ အမျှဝေပါ လို့ တာပါ။စစ်သားလေးရေ။
ပဲ ပြောမလား၊ ရင်ထုမနာ ကြေကွစွဲာနဲ့ ငါ့အမွေကိုယူခဲ့တဲ့ တယောက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရဲရဲတောက် တော်လှန်နေ သားဆိုးတွေ သားမိုက်တွေ ဆိုပြီး သေရွာက တဖန် ပြန် တဲ့ ဘဘကြီး တစ်ယောက်က ဒီနေ့ ပြောလိုက်တယ်။ လာပြီး လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲကြီးတွေ ဆက်ဆင်နွဲရအုံးမယ် "သူ့မြေမကျဉ်းကိုယ့်ကွင်းမပိတ်" စေချင်ဘူးတဲ့။ သွားလမ်း ငါပြန်လာခဲ့မယ် လို့ ရင့်ကြူးကြွေးကြော် သွားလေမလား။ ပြေပြေ ၊ ပြန်လမ်းချောချော ဖြစ်စေချင်တယ်တဲ့။လွတ်လပ် အခု ပြည်တွင်းမှာ မဟာလူသား အမျိုးသားခေါင်းဆောင် မှ အမျှဝေပါ လို့ ပြောခဲ့တဲ့ ငါတို့ အဖိုး အဖွားတွေ မျက်နှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ။ ကမ္ဘာမှာ လုပ်အများဆုံး လူတွေတောင် ကို ပြန်ထောက်ပြီး ငါတို့ အတူတူ ချစ်ခင်စည်းလုံးစွာနဲ့ ငါ သူ မ ရဲ့ များပြားလှတဲ့ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်ဖွယ်တာတွေကို တို့ ဘ၀တွေ ခိုင်မာအောင် ငါတို့ အနာဂတ်တွေ လှပ မှီမယ် မထင်။ သူ့နောက်မှာ သူမ နားမှာ သူမ အနီးမှာ အောင် အတူတူ အလုပ်လုပ်ကြမယ်လေ။ ကိုင်းကျွန်းမှီပေါ့။ သူတို့နိုင်ငံကိုကောင်းစေချင်တဲ့
အ စစ်သားလေးတို့ရေ။ မင်းတို့ ငါတိ့ေုဘးနိုင်ငံတွေကို ကြည့်
ပြည့်၊ သူတို့ ထဲမှာလည်း ဆွမ်းဆန်ထဲက ဟာ တချို့က လိုက်စမ်း။ သူတို့ဆီကမျိုးဆက်သစ်ကလေးသူငယ်လေးတွေ ယောင်တီးယိမ်းခို နေသေးတာပေါ့။ ငါတို့ သူတို့လည်း ရဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေဟာ တောက်ပ ကြည်လဲ့ ငြိမ်းချမ်း ဧရာဝတီ နံဘေးတွေမှာ မွေးခဲ့တာပါ။ ငါတို့ကို စစ်သေနတ် ကြည်နူးလို့ .........အားမကျ ဘူးလား စစ်သားလေးရေ....။ တွေမိုးပြီး မော်ခွင့်မပြု၊ ပြူခွင့်မသာ၊ အာဏာစက် အောက် ပြားပြားမှောက်အောင် နံဘေး
မာန်မောက်နေပေမယ့် တကယ့်တကယ်တွေးကြည့်တော့ သူတို့ထဲမှာ ငါတို့ သားချင်းတွေ ငါတို့ ညီအကိုတွေ ငါတို့
အရပ်ဘက် စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ - အပိုင်း (၁) -
ဆွေမျိုးတွေ အားလုံးသော ငါတို့ဟာ တမြေတည်းသားတွေ ပါ။ ဘာလို့များ တမြေထဲသားချင်း နှိပ်စက်ကလူ ပြုချင်ကြပါ လိမ့်။
ဘာလို့များ ဒီမြေပေါ် အတူတူ မွေးဖွားကြီးပြင်း
လာခဲ့ကြပြီး၊ ထားစရာ မရှိအောင် ချမ်းသာလွန်းသူ အနည်း စုနဲ့ စားစရာ မရှိတော့အောင် မွဲတေလွန်းသူ လူထု အများစု ကြီးအဖြစ် သိမ်ငယ်စရာ နိုင်ငံရွာ အဖြစ် ကွာခြား သွားရ ပါလိမ့်။ မိုးယံချိမ့်မတတ် လူထုအုံကြွမှုကြီးတွေ၊ ဘုရားသား တော်တို့ရဲ့ ဘ၀ဂ်ညံမျှ မေတ္တာပို့ မြည်ကြွေးငိုသံတွေဟာ ယမ်းခိုးတွေ သေနက်သံတွေ ၊ သွေးညှီနံ့တွေ၊ အကျဉ်းစ ခန်းက ခြေချင်းသံတွေ နဲ့ အတူ မြုပ်ကွယ် စခန်းသိမ်း သွားတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကျည်ဆံထိပ်ဖူး ပိုင်ရှင်ကြီး တွေထဲမှာလည်း အိပ်မက်ဆိုးတွေ ၊ နမိတ်ဆိုးတွေနဲ့ အရိပ် ထိုးနေတာဟာ
ဘီလူးတွေ ပေါလာလို့ပေါ့တဲ့ ၊ တချို့က ဆိုတယ်။ တချို့ က သုံးသပ်တယ်။ ဘီလူး မဟုတ်ဘူးတဲ့ ၊ အရင်းမြစ်က စနစ်။ လူတွေကို ဖိနှိပ်ကျွန်ပြုတဲ့ အာဏာရှင် စနစ်တဲ့။ ဒါကို ဘယ်လိုလုပ်မှ ဒီအာဏာရှင် ဘီလူးတွေကို ချေဖျက် သုတ် သင်နိုင်မလဲတဲ့။ စစ်သားလေးက သူ့ဆရာ တယောက်နဲ့ တိုင်ပင်ဖူးတယ်။ အာဏာရှင် ဘီလူးက သေနက်အားကိုး နဲ့ပဲ တန်ခိုး ထွားတာဆိုတော့ သူ့ကို သေနက်နဲ့ပဲ ပြန်နှိမ် လို့ ရမယ်တဲ့။ သေနက်ကိုင်ထားတဲ့ စစ်သားလေးတို့ရေ။ အထွေထွေ နာကျည်း စက်ဆုပ်စရာတွေ ငါတို့ မပြောတော့ ပါဘူး။ မင်းတို့နဲ့ ငါတို့ ဟာ တမြေထဲ သားတွေပါ။ ငါဟာ
၂ဝ ရာစု ကုန်ဆုံးခါနီးနှစ်များအား နိုင်ငံရေးကမ္ဘာကို အသွင် ပြောင်းစေခဲ့သော သမိုင်းဝင် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကြီး (၃) ခု ကအမှတ်အသားပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက် (၃)ခုမှာဒီမို ကရေစီပြန့်ပွားလာခြင်း၊ ဆိုဗီယက် ကွန်မြူနစ်စနစ်ပြိုကျခြင်း နှင့် စစ်အေးတိုက်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤနီးကပ် စွာ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသော
အဖြစ်အပျက်ကြီး (၃) ခု
သည် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးပုံစံ အဟောင်းအား မှောက် လှန်ပြောင်း လဲပစ်ခဲ့ရုံမက နိုင်ငံအတော်များများ၏ ပြည် တွင်းနိုင်ငံရေးအားလည်း
သည်။ “နိုင်ငံရေးအရ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်
များ အကြား ဆက်ဆံရေး” နှင့် ပတ်သက်သည့်ကာလ ကြာရှည်တည်တံ့လာခဲ့ပြီဖြစ်သည့် မေးခွန်းသည် ပြန်လည် ဆန်းသစ်လာသည့် အရေးတကြီး အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောကိစ္စရပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဤမေးခွန်း သည် အသွင်သစ်ဖြင့်လည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့ သုိ့ ဖြစ်ခြင်း သည်လည်း အံ့သြစရာ မဟုတ်ချေ။ စစ်အေး ကာလအတွင်းက ကြီးကြီးမားမား သီးခြားစီ
ကြွဲ ပားသော ပညာရှင် အုပ်စုကြီးနှစ်ခုသည် အရပ်ဘက် စစ် ဘက်ဆက်ဆံရေးကိစ္စရပ် အပေါ်မှာ အထူးပြု လေ့လာခဲ့ကြ သည်။
စာမျက်နှာ(၁၀) ကော်လ(ံ ၁) သို့...
ဘက်တဘက်တွင် နိုင်ငံတကာ လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်အပေါ်လေ့ အများစုကိုတုန်လှုပ် ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ကဏ္ဍနှင့်
ဖွဲ့စည်းမှု၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်
လာသော ပညာရှင်များက အထူးသဖြင့် မဟာ အင်အားကြီး ကို နိုင်ငံအတော်များများတွင် အင်အားချိနဲ့ သွားစေခဲ့သည်။ ပတ်သက်၍ သော့ချက်ကျသော
နှစ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံခြားရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးမူဝါဒပြုလုပ် ခြင်းအ အထူးသဖြင့် လက်တင်အမေရိကတွင်ဖြစ်သည်။ စစ်မှုထမ်း စိုက်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဒက်စ်ခ်ျက အမေရိကန်ပြည်ထောင် ပေါ် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် တာဝန်ရှိများ၏
သြဇာ အရေအတွက်နှင့် စစ်အသုံးစရိတ်
လွှမ်းမိုးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာခဲ့ကြသည်။
လျှော့ချမှုသို့ ဦးတည် စုနှင့် ရုရှားတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအပေါ် အာရုံစိုက်ဖေါ်ပြ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထားပြီး ဂွတ်ဒ်မဲန်က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် နှိုင်းယှဉ်
တဘက်တွင်တော့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ (အထူးသဖြင့် ၄င်း၏ လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိ လာခဲ့သည်။ သို့သော် ယင်းသည် စစ် လျက်လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုာများအ အစိတ်အပိုင်းအတော်များများတွင် စစ်အစိုးရများအုပ်ချုပ်နေ ဘက်ဆိုင်ရာ ထူထောင်မှုများကို သဘာဝကျစွာပင် သက် ပေါ် အာရုံစိုက် လေ့လာထားပါသည်။ ဒုတိယ
သည့် လက်တင် အမေရိက နိုင်ငံများ) မှ ကျောင်းသားများ တောင့်သက်သာ မရှိအောင် ချန်ထားပစ်ခဲ့ပြန်ပါသည်။ စစ် လက်တင်အမေရိက၊ အာရှနှင့် အာဖရိကနိုင်ငံများကို ဦး သည် အခြေခံအားဖြင့် သူတို့လေ့လာသောနိုင်ငံများ၏ ပြည် ဘက်တို့၏ အရင်းအမြစ်များကို
လျှော့ချခြင်းသည် သူတို့ တည်
ရေးသားထားသော အက်ဆေးများဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ
တွင်းရေးအပေါ် စိတ်ဝင်စားစွာလေ့လာခဲ့ကြသည်။ မကြာခ အား နိုင်ငံရေးအရ စည်းကမ်းထိန်းချုပ်ရန် မလွယ်ကူမှုဆီသို့ နိုင်ငံများအကြာင်းကို
ဏ ဆိုသလိုပင် ထိုပညာရှင်များသည် သူတို့၏ လေ့လာမှု ဦးတည် တိမ်းစောင်း သွားစေသည်သာမက ခေတ်သစ်နှင့် ထိုစာရေးဆရာ ၃ ဦး စလုံးသည် ထိုဒေသများ၏ ကို
ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု လိုက်လျောညီထွေရှိစေမည့် တာဝန်များကို အသွင်ပြောင်း လက္ခဏာာများကို
(Democratization)တို့နှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်၍ဆန်းသစ်စေ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းကို ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းအခက်အခဲ ကြွဲ ပား ခြားနားမှုများကို ထက်မြက်စူးရှစွာထွင်းဖေါက် တွေး ခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်၏အဖွင့်ဆောင်းပါးကို ရေးသားခဲ့သော ဖြစ်သွားစေသည်။ အရပ်ဘက် စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေးကို ခေါ်သိမြင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ဂျူအန်ရီရယ် (Juan Rial) စာရေးဆရာ
ဆင်မြူရယ်ပီဟန်တင်တန် (Samuel P. အသွင်ပြောင်းစေခဲ့သည့်
အချက်အ က မက္ကဆီကို၊ ဗဟိုအမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီရံ နိုင်ငံများ၊
Huntington) သည်ထိုကွာဟချက်ကိုတံတားထိုးပေးခဲ့သော လက်များသည် ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာ ဆောင်လာသော် တောင်အမေရိကနိုင်ငံများတွင် လုပ်ဆောင် အောင်မြင်မှု ရရှိ ပညာရှင်များအထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယနေ့ လည်း ယင်းကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရာတွင် ကျင့်သုံးသည့် ခဲ့သော ကာလတွင်
အရှိန်အဟုန်နှင့် နည်းလမ်းများသည် တဒေသနှင့်တဒေသ ကြီးကြီးမားမားကို ပုံစံများကို
ဖြွံ့ ဖိုးတိုးတက်ခဲ့မှုကြီး (၃) ခု၏ရိုက်ခတ်မှုအောက်မှာအောက် ကြွဲ ပား ခြားနားလျက် ရှိနေပေသည်။ ဒေသတစ်ခု အတွင်း များကို
အရပ်ဘက်-စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေး၏ ထူးခြားသော ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့သည်။
ပုံသွင်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သော အလွန်ကြွဲ ပားခြားနား
ပါထူးခြားချက်များ ဖြစ်ပွားလာခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာကမ္ဘာကြီး မှာပင် နိုင်ငံတစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူညီကြပေ။ ထိုကြောင့် ယင်း သည့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်
အား ပထမ၊ ဒုတိယနှင့် တတိယကမ္ဘာဟူ၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ညီလာခံ ကျင်းပရန်အတွက် ဆင့် အသီးသီးတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် သော တွေးခေါ်ပုံသည် ခေတ်မမှီတော့ဘဲ ဖြစ်လာသည်။ ဤစာအုပ်တွင်
ဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီး ပြိုကျပျက်စီးသွားမှုသည် မဟာအင် ပထမဦးစွာ ပြင်ဆင်ခဲ့ရသည်။ ယင်းညီလာခံ ကျင်းပရန်အ dez)က အားကြီး
စုစည်းဖေါ်ပြထားသော အက်ဆေးများကို သည့်ကာရိုလိုင်းနား ဂျီဟာနန်ဒက်ဇ် (CarolinaG.Hernanအလွန်စိတ်
နိုင်ငံတစ်ခုသာမက ဒုတိယကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး တွက် စည်းရုံးပြင်ဆင်ရာတွင် ယေဘူယျကျသောအကဲဖြတ် နိုင်ငံ ဖြစ်သည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိစ္စအား ပို၍ပြည့်စုံကျယ်ပြန့်
ကွယ်ပျောက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ တတိယ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ မှု အနည်းငယ်မျှသာနှင့် ဒေသအတိအကျ နိုင်ငံအတိအကျ သော အရပ်ဘက်-စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေးပုံစံဖြင့် ဖေါ်ထုတ် ဟု ခေါ်ခဲ့ကြသော နိုင်ငံအတော် များများသည်
အသစ် တိ့၏ုအရပ်ဘက် - စစ်ဘက်
ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ပြုမူပုံ၊ တင်ပြခဲ့သည်။ဂျက်ကီစင်လီယားစ်
ထွက်ပေါ် လာသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ များဟု ခေါင်းစဉ်ထိုး ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ပုံ အတော်များများကို ထားမှုအောက်မှာ
လေ့လာရသည့်နိုင်ငံများ ဖြစ်လာသည်။ ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။
ထိုနိုင်ငံများသည် ကွန်မြူနစ်ခေတ် လွန်
တချိန်တည်းမှာပင် နိုင်ငံအတော်များ နေအကြောင်းကို သာမက တောင်အာဖရိကတွင် အစိုးရ
ပါဝင်သူများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါဝင်နိုင်ကြရန် အသစ်နှင့် အသစ်ပြန်လည် တည်ဆောက်သော လက်နက်
စားများ အဖြစ်လည်း အကျူံးဝင်လျက် ရှိပေသည်။ ဤကွဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အက်လွယ်သော
(Jakkie Cilliers) က
ထည့်သွင်းရန် ဆာဟာရအာဖရိက နိုင်ငံငယ်များမှ ယေဘူယျ
ထိုကြောင့် ဤစာအုပ်တွင် (ဥ)ရူဂွေး၊ ကိုင်တပ်ဖွ့မျဲားနှင့်
စည်းလုံးညီညွတ်မှု လျော့နည်းလျက် ရှိ ဖိလစ်ပိုင်၊ တောင်အာဖရိက၊ ပိုလန်၊ ရုရှနှင့် အမေရိကန် အထူးစိန်ခေါ်မှုများအကြောင်း အသေးစိတ် အကဲဖြတ် စီစစ်
သည့် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ် စတင်
ရေးသားတင်ပြမှု သုံးသပ်မှုများကိုလည်း ရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။ ကွန်မြူ
စနိုင်ငံများတွင် အရပ်ဘက် အုပ်ချုပ်ရေး (Civilian Rule) ၏ များကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ထို့အပြင် ဤညီလာခံသည် နစ်ခေတ်လွန်ကမ္ဘာ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ရှင်သန်မှုနှင့် ထိရောက်စွာ ကျင့်သုံးနိုင်မှုကို တ အာဂျင်တီးနား၊
နိုက်ဂျီးရီးယားနှင့် ဟန်ဂေရီတို့မှ ဝေဖန် တတိယအခန်းသည် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ အဟောင်းတွင်ဖြစ်
ချိန်ချိန်တွင် အမှန်တကယ်ဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းသော ခြိမ်းခြောက် သုံးသပ်သူ ရှုထောင့်အမြင်များဖြင့်လည်း အကျိုးကျေးဇူးများ ပွားသော အရပ်ဘက်-စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးအသွင်ပြောင်းမှု မှု အဖြစ် စစ်ဘက်သည် ရပ်တည် ကိုယ်စားပြုလျက် ရှိနေ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဤစာအုပ်ကို အခန်းတစ်ခုစီတွင် အက်ဆေး ၏ အလွန် ထူးခြားသော အခြေအနေ ပေသည်။
ထိုကြောင့် အရပ်ဘက် စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေး (၃) ပုဒ်စီ ပါဝင်သော အခန်း (၃) ခန်းအဖြစ် ခွဲခြားထားပါ ကို ရောင်ပြန် ဟပ်ပြသည့် ကြွဲ ပားခြားနားသော ကိစ္စ ၃ ရပ်
(Civil-Military Relations)ဆိုင်ရာ မေးခွန်းသည်ဒီမိုကရက် သည်။ နိုင်ငံရေး သိပ္ပံပညာရှင် ဂျိူးဆက်အက်စ်နိုင်းဂျူနီယာ ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ သူကိုယ်တိုင် သူ့နိုင်ငံ၏စစ်တပ် ပြုပြင် တစ်ခေါင်းဆောင်များအတွက် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးရ (Joseph S.Nye. Jr) ၏ နိဂုံးချုပ် စကားလည်း ပါဝင်ပါ ပြောင်းလဲမှုတွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ မည့်
ခေါင်းစဉ်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေး သိပ္ပံပညာ သည်။
လွှတ်တော် အမတ်တာဝန် အဖြစ်နှင့် လည်းကောင်း သော့
ရှင်များ၏ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်အဖြစ်လည်းကောင်းမြင့် ဤနိဂုံးချုပ်စကားသည် သူ့အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ လုံခြုံရေး ချက်ကျသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သူ ဂျဲနာ့ဇ်အိုနီစကီဝစ်ဇ် မြင့်
တချိန်တည်းမှာပင် ရာနှင့် ပတ်သက်သော အမေရိကန်
ကာကွယ်ရေးဌာနအ (Janusz Onyskiewicz) က အရှေ့ဥရောပ နိုင်ငံများအနက်မှ
စစ်အေးတိုက်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားခြင်းသည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ တွက်လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည့် ပိုလန်နိုင်ငံကိစ္စအား အလေးအနက်ပြု များ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ ရည်မှန်းချက်၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ဆောင် စဉ်တွင် ညီလာခံ၌ မိန့်ကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း အပေါ်တွင် အ ဖေါ်ပြ ခဲ့ သည်။ ရမည့် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများအပေါ် တကမ္ဘာလုံး အတိုင်း ခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဖွင့်အခန်းဖြစ်သည့် “ခေတ်သစ် လက်နက်ကိုင်
အရှေ့ ဥရောပနိုင်ငံများသည် တပ်ဖွ့မျဲား၏
အတာဆောင်စွာ ပြန်လည် တွေးခေါ်စဉ်းစားမှုတခုကို ပြုလုပ် ကာလ အရပ်ဘက် - စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေး” က စစ်သား အား ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ရပ်တည်ချက်အသစ်ကို ပြောင်းလဲ ရန် မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်စေခဲ့ပေသည်။ ဖြစ်လာနိုင်စွမ်း နှင့် သောအရှေ့၊ အနောက် ပဋိပက္ခ
အခြေခံပေါ်တွင် ကြည့် လျက် ရှိသည့်ကျယ်ပြန့်သောတကမ္ဘာလုံးလက္ခဏာ ဆောင် ထိ့အုပြင် ထိုလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များအား ဒီမိုကရက်တစ်
သည့် အမြင်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံဖေါ်ထားသော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သည့် လမ်းကြောင်းကို ကြည့်ပါသည်။ ညီလာခံ၏ အဓိက အရပ်ဘက်ထိန်းချုပ်မှု ဖွ့စဲည်းမှုနှင့် လုပ်နည်းကိုင်နည်း တို့အား ရွေ့လျှားပြောင်း ပြောဆိုတင်ပြသူ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဆယ်မြူရယ်လ်ပီဟန်တင် ပမ်းခဲ့ရသည်။ လဲနေသော
မသေချာသော နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်း တန်သည် လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခု ကျော်ကျော်ကစ၍ (Lilia Shevtsova) သည် ၄င်းအင်ပါယာနှင့် မဟာအင်အား
ကျင်နှင့် လိုက်ဖက်စေရန်အတွက် ပြန်လည်စည်းရုံး ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီ ကြရပေမည်။ ဤနိုင်ငံတကာဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တွင်
ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကြောင့် ကြီးနိုင်ငံ အဆင့်အတန်းအဖြစ် ဆုံးရှုံးမှုကို ညှိနှိုင်းယူမည့်
အ အစိုးရများနှင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့်
ဆိုပါ နိုင်ငံများအနေဖြင့် သူတို့ရင်ဆိုင်နေရသည့် အဖြစ်လာ ဿနာအဖြစ် နိုင်ဆုံးသော
အောက်သို့ ရောက်ရှိအောင် ကြိုး
ပတ်သက်၍ ပြ ရုရှား စစ်တပ်၏ အတော်အသွင်မတူသော ပြဿနာများ
စိန်ခေါ်မှု အကြောင်းကို ရေးသားခဲ့သည်။ ရုရှစစ်တပ်သည် မသေချာ
ပြင်ပခြိမ်းခြောက်မှုများကို ရုပ်လုံးဖေါ် အဓိ အသစ်များအပေါ် အာရုံစူးစိုက် လေ့လာ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ စိတ်မချရသေးသော ဒီမိုကရေစီ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆက်
ပ္ပါယ်ဖွင့် (Identify) ရန် ခက်ခဲလျက်ရှိသည်။ ဆိုဗီယက် ၄င်းနောက်တွင် ယူနီယံပြိုကျမှုသည် အစိုးရများကို
ခြိမ်းခြောက်သည့် စစ် ဂွတ်ဒ်မဲန် တို့ တင်ပြခဲ့သော အက်ဆေး ၂
တပ်ဖွဲ့များကို သိမ်းပိုက် ပိုင်ဆိုင် ထားသည့်
လူးဝစ်စီဒဗလျူ လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်မည်သို့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ် ပုဒ် လည်းပါရှိ အောင် အသွင်ပြောင်းယူရမည်ကို လေ့လာနေစဉ်တွင် ထိုအ
လက်ဝဲသူပုန် ပါသည်။ ထိုအက်ဆေး ၂ ပုဒ်သည် စစ်တပ်၏ အခန်း ခြေအနေများကို တွေ့ကြုံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
လယ်၊ ခြံ ဧကရာကျော် မောရဝတီရေတပ်မှသိမ်း
ကျလွန်းထော - တနင်္သာရီတိုင်း၊ ရေဖြူမြို့နယ် ကျွဲသုံးညီမ
ကျေးရွာရှိ လယ်မြေနှင့် ဥယျာဉ်ခြံများကို သိမ်းဆည်းရန် အ တွက် မောရဝတီ ရေတပ်စခန်းမှ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင် တိုင်းတာနေပြီး
တိုင်များကို စိုက်ထူထား သည်ဟု ဒေသခံ
ရွာသားတဦးကပြောသည်။ “စစ်သင်တန်းကျောင်း ဆောက် ဖို့လို့ ပြောသံ ကြားတယ်၊ ရွာသားတွေကို ဘာမှ မပြောဘူး၊ ကျနော့် ရော်ဘာခြံ ခြစ်ရပြီးသား ၈ ဧကနဲ့ သီဟိုဠ်ခြံ ၁၈ ဧက အကုန်လုံးပါသွားတယ်” ဟု အသိမ်းခံရသည့် ခြံရှင် တဦးက ပြောသည်။ အလျား ၇ မိုင်၊ အနံ ၄ မိုင် အကျယ်ရှိ လယ်မြေနှင့် ဥယျာဉ်ခြံမြေများ သိမ်းဆည်းခံရသည်ဟု ခန့် မှန်းရကြောင်း၊ အသိမ်းခံရသူများအနေနှင့် မည်သည့်ဌာနသို့ တိုင်ကြားရမည်ကို
မဝံ့ရဲကြောင်း သူကပြောသည်။ “သူတို့တပ်ကိုကြောက်နေ ရတော့ ဘာမှပြန်မပြောရဲဘူး၊ ကျနော့်ခြံဆိုရင်လက်ရှိပေါက် ဈေးသိန်း
မှာ (၁၀) သိန်းတန်ကို (၃) သိန်းနဲ့ ပြန်ရောင်းတောင် ဘယ် သူမှမဝယ်ဘူး၊အချို့ဆိုရင် ခြံဝယ်ထားတာတနှစ်မပြည့်သေး ဘူး၊ အခုလို ဖြစ်သွားတာ လူတိုင်းက တော်တော် စိတ် ဓါတ်ကျနေကြတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။ အသိမ်းခံ ရသည့် ကျေးရွာသားများမှာ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေကြသည့် အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားကြပြီး အချို့မှာ နီးစပ် သည့် ရေးမြို့သို့ပြောင်းရွေ့သွားကြသည်ဟု ကိုယ်တိုင်မြင် တွေ့ခဲ့သည့်
ကို (၁၅) ဦး ထွက် လာတယ်၊ ပြီးတော့ ထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်း ၂၀ ဦးလောက်သွားကြတယ်၊ သူတို့ကို ကျနော် မေးကြည့် တော့လုပ်စရာမရှိလို့ ရွာကနေ ထွက်သွားရတယ်လို့ ပြော တယ်” ဟု သူက ပြောသည်။ ၎င်းပြင် ကျေးရွာသားများအ ပေါ် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် အနိုင် ကျင့်ခြင်းများ ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြောင်း ဒေသခံများက ပြော သည်။ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်သူများ အနေဖြင့် ထိုက်သင့် သည့်လျော်ကြေးငွေများ ပြန်လည်ရရန်အတွက် လက်ရှိအစိုး ရသစ်ထံ ဖော်ထုတ် တိုင်ကြားသွားမည်ဟု မွန်ပြည် လူ့အ ခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်း ကောက်ခံရေး တာဝန်ခံ နိုင်အွန်းမွန်က ပြောသည်။ “အခုလို သိမ်းယူနေတာဟာ ဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ် မဟုတ်ဘူး၊ ဒါ တင်မကသေးဘူး လမ်းဖောက်၊ ဂက်စ်ပိုက်လိုင်းလုပ်ဖို့ ဆို ပြီး ဒီကျွဲသုံးညီမရွာအနီးမှာ ရှိတဲ့ မင်းသားရွာ၊ သဲချောင်းရွာနဲ့ ဟိန်းဆဲရွာ တွေမှာလည်း မြေတော်တော်များများ သိမ်းထား သေးတယ်” ဟု ကိုအွန်းမွန်က ပြောသည်။ ကျွဲသုံးညီမကျေး ရွာမှာ မွန်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်း အစပ်ရှိ ကျွန်းပေါ် တွင် တည်ရှိသည့် ရွာတရွာ ဖြစ်ပြီး အိမ်ခြေ ၆၀၀ ကျော်ရှိ ကာ
အရန် စစ်တပ် ဆိုပြီး ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်နေ ကိုယ့်ယူနီဖောင်းကိုယ်ဝတ် ခေါ်တဲ့နေ့လာ ခိုင်းတာလုပ် အမိန့်အာဏာဖီဆန် ပါးရိုက်ခံရမယ် ဒါကသာမန်ပြည်သူတွေအတွက် အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ၂နှစ် အကြယ်ချုပ် (အဓမ္မ လုပ်အားပေး ပပြောက်ရေး ပေါ့) ရုပ်ချော ကိုယ်လုံးလှ ပညာတတ် စစ်သည်မမ များအတွက်ကတော့ ညှာတာထောက်ထား သက်သက်ညှာညှာပဲထားမယ်တဲ့ အရာရှိရိပ်သာ ဗိုလ်များ ရှိတဲ့နေရာ အိပ်ရာဝင်ချိန်လေး ညစောင့် လုပ်ပေးရမယ်တဲ့ (စစ်တပ်မှာမိန်းမများတော့ မုဒိန်းမှူ့ မဖြစ် တော့ဘူးပေါ့) လူငယ်ကွန်ရက်တို့ ဒုတိယပင်လုံတို့ အတိုက်ခံ ပါတီ တို့ အာဏာရှင်တော်လှန်လိုသူများအတွက်ကတော့ မဝင်မနေရ ရက်စွဲတပ်
ဆင့်ခေါ်စာ လေး ကြံ့ဖွတ်က
မျှဖြင့်အွန်လိုင်းမှ ဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤစာစောင်တွင်
မိမိတို့ တိုင်းပြည်နှင့် တပ်မတော် အနာဂတ်အတွက်ကျိုး
စစ်တန်းလျား ရောက် သေနတ် ဖောက်ရဖို့မတွေးနဲ့ အထုပ်ထမ်း ပေါ်တာ နယ်စွန် နယ်ဖျားနဲ့
ပမ်းလျက်ရှိကြသော တပ်မတော်သားများအား ဂုဏ်ပြုရင်း
ငှကဖျားပေါတဲ့နေရာ ပြည်တွင်းစစ် မိုင်းကွင်းထဲကျမှ
ငါ အရင်မဝင်ပါရစေနဲ့ဆိုပြီး ရှူးပေါက်ချ နေရမယ်
(နိုင်ငံ ရေး အ ကျဉ်းသား တို့ ပေါ် တာ တို့ မရှိသလောက် ဖြစ်သွားမယ်) နောက်ရွေးကောက်ပွဲရက်ကပ်
မျိုးကြောင့်အသိမပေးနိုင်ခဲ့သော တပ်မတော်သားများအား လည်း ဤနေရာမှတောင်း ပန်အပ်ပါသည်။
အတိုက်ခံပါတီကဝင်ရွေးမည့်အမတ် ဟိုအော် ဒီအော်လုပ်မည့် လူတတ် များကြတော့
စစ်တပ်က ဆင့်ခေါ်စာ ထပ်ပေး လိုအပ်ချက်အရမဖြစ်မနေ နောက် တနှစ်ထပ်ဝင်ပေးရမယ်တဲ့ (မဲ ခိုး စရာမလိုတော့ဘူး ပေါ့) အာဏာရှင်နဲ့နီးစပ် သူတို့ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် များကြတော့
တပ်နှင့်ပြည်သူ စာစောင်သို့ တပ်မတော်သားများမှ မိမိတို့ ၏
ဘွဲ့ လက်မှတ်အတုတွေ ကပ်
ခံစားချက်များကို ရေးသားပေးပို့နိုင် သကဲ့သို့ ပြည်သူလူ
ထုမှ မိမိတို့အနေဖြင့် တပ်မတော်အပေါ်အမြင်နှင့် တကွ
ဖြတ်လမ်းက အပွင့်တပ် အနာဂတ်မှာ လွှတ်တော်အမတ် ဖြစ်လာကြဦးမယ်
မိမိတို့ မြင်ချင်သည့် တပ်မတော်ပုံစံများနှင့် အခြားသော
ဆောင်းပါး၊ ဟာသ၊ ကာတွန်းများကို အောက်ပါ လိပ်စာ
တရား ဥပဒေ စိုးမိုးတဲ့ ခေတ် ရောက်ခဲ့ရင်
သိ့လိုပ်မူပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ပေးပို့လာသောစာမူများကို မိမိ
စစ် မှု့ထမ်းဖို့စာရင်း မင်း မတိုက်တွန်းလဲငါ အ ရင် သွားသွင်းမယ်သူငယ်ချင်း http://www.mandalaygazette.com/39116/societylifestyle/aha-jokes မှ...
တိ့အုယ်ဒီတာဘုတ်အဖွဲ့ မှ တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်ကာ ထည့် သွင်းဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
တပ်မတော်သားများအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအသိတရားများပြန်လည်ရရှိလာစေရန်၊ ထိုသို့ရရှိလာခြင်းဖြင့် လက်ရှိတိုင်းပြည်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော နိုင်ငံရေးပြဿနာများသည်
စစ်ရေးဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသည်ကို သိနားလည်လာစေရန်။ ၃။
ထိုသ့သိုိမြင်လာသည်နှင့်အမျှ ပြည်သူအပေါ်တွင် စာနာနားလည်သည့် တပ်မတော်သားများပေါ်ထွန်းလာစေရန်။
ပြည်သူလူထုမှလည်း တပ်မတော်သားများ၏ အခက်အခဲများနှင့် အမိန့်နှင့်တာဝန်များကို သိနားလည်ပြီး တရားခံအစစ်ကိုသိမြင်လာစေရန်။
ကြပြီး နိုင်ငံရေးအမြင်လုံးဝရှင်သန်ခွင့်မရှိသူများကို ဒီမိုကရေ ရိုက်နှက်ဆဲဆိုပစ်ခတ်ခိုင်းသည့်အမိန်မျိုးကို
ဒီမိုကရေစီနဲ့ တပ်မတော် - အပိုင်း (၁)
ပဲ အဆိုးမြင် ဆန့်ကျင်ဘက် ရှုထောင့်မှ
ဗိုလ်မှူးကျော်ကျော်ခိုင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့တပ်မတော်ကြီးတွင် ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အ ခွင့်အရေး စသော အသံများကို ကြားရမှာ ကြောက်ကြသည်၊ မုန်းသည်။
သု့ေိသာ် ထို Democracy
နဲ့ Human Rights အဓိပ္ပာယ်
ကို သေချာ မသိသလို ခံလည်း မခံစားဖူးရပေ။ “ဟင်း၏ အရသာကို ဇွန်းမသိ” သကဲ့သ့ပို င်။ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
အနောက်နိုင်ငံများက မြန်မာနိုင်ငံကို “၁၈ရာ
စု” ကဲ့သို့ နယ်ချဲ့ ချင် ၍
ပစ်လွှတ်လိုက်သော စကားလုံးဟူ၍သာ နားလည်သည်။ ဒီ ကနေ့
တပ်မတော်ထဲက မျိုးဆက်သစ် အရာရှိ/ စစ်သည်
များ မပြောနှင့် ယနေ့ တပ်မမှူး
အရာရှိများပင် သေချာနားမလည်။ သေချာစွာ နားလည်ရန် လည်း မစူးစမ်းကြချေ။ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး တု့ကို စူးစမ်းလေ့လာ နားလည်ဖို့ ကြိုးစားလေ့လာသူများရဲ့ အခွင့်အလမ်းကိုလည်း
အတွင်း၌ BBC၊ VOA၊ RFA၊ DVB
ထုတ်လွှင့်သည့် ရေဒီယို နားထောင်သူများကိုလည်း ရှုတ်ချ ပိတ်ပင်၊ တားမြစ်ထားသည်။ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အ ရေး၏ အရသာကို
လည်း ဒီမိုကရေစီတော့ လာမပြောနဲ့ ရန်သူ ဖြစ်သွားမည်။ ဘာကြောင့် ဒီလို ဖြစ်နေရသလဲဟု ဆင်ခြင် သုံးသပ်မိသည်။ ယနေ့
ကိုယ့်ကိုကိုယ် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲဟု ဆိုသူ
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် လုပ်သူ ဗိုလ်သန်းရွှေ၏ လက်ချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသည် ယခင်
စစ်ဆင်ရေး အရာရှိ (Psychological Warfare Officer) လုပ်ခဲ့ဖူးသည်။
ဒါပေမဲ့ ထက်ထက်မြက်မြက်တော့ မရှိ။
အတွေ့အကြုံတော့ ရှိသည်။ ၄င်း အာဏာရှင် ဖြစ်စ အစွယ် မထွက်သေး၍ အတွင်း၌ပင်
ပြည်သူသို့ အာဏာ ပြန်လွှဲပေးမည်ဟု ယုံ
ကြည်ဆဲ ရှိကြသည်။ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ပညာ (PsyWar) ၌ အလွန်တော်သူ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး(ဟောင်း) သိန်းစိန် နှင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ရေး အဖွ့ေဲခါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးကျော်ဆန်း တို့ကို တာဝန်ပေး၍ စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေး
တပ်မတော် အတွင်း၌ Psy-War နည်းပြအဆင့် သင်တန်း နှင့် တိုင်းအဆင့် တိုက်ပွဲဝင် စည်းရုံးရေး မွမ်းမံသင်တန်းများ ဖွင့်၍ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ပြုလုပ် ခဲ့ကြသလို ကကပြည် ဌာန ဖွ့စဲည်းပုံကို စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး စကားလုံး ဖြည့်စွက် တိုးချဲ့ပြီး ရုပ်မြင်သံကြား ဇာတ်လမ်းများ၌ ဒီမိုကရေစီ ဆန့် ကျင်ရေး ဇာတ်လမ်းများ ရိုက်ကူးကာ ၀ါဒဖြန့်သည်။ သတင်း စာစောင်များ၌
သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် အတိုက်အခံ အ ဖဲ့အွစည်းများကို ကာတွန်းရုပ်ပြောင်များဖြင့် သရော်လှောင် ပြောင်ထည့်ကြသည်။ အမေရိကန်
အားကိုးပုဆိန်ရိုး၊ ပြည်တွင်းရေးကို စွက်ဖက်တဲ့
နိုင်ငံ များအား ဆန့်ကျင်ကြ ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်သယောင် စာသားများပါဝင်သော ဆိုင်းဘုတ်များ “ပေါ်တင်” ထောင်ကြ သည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့သည် ဒီမိုကရေစီ ဆိုသည်ကို ရုပ် ဆိုးအောင် ကြောက်လန့်ဖွယ် ဖြစ်အောင် တင်ပြ
ခဲ့ကြရာ အတော်ထိရောက်မှု ရှိခဲ့သည်။ ဗရုတ်သုက္ခ ဒီမိုက ရေစီ၊
ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဒီမိုကရေစီဟု အပုတ်ချ နာမည်
ဒီမိုကရေစီ ရရင်ဘဲ ပြည်ထောင်စု
ပြိုကွမဲယောင်၊ ဖယ်ဒရယ် ကိုင်ရင်ဘဲ ခွဲထွက်
သားများ ရှိသလို ဖန်တီးပေးကြသည်။ နဂိုကမှ မဆလ ခေတ်၌ မွေး၍
စီ အဓိပ္ပာယ်၊ အနှစ်သာရများအား စူးစမ်းလေ့လာခွင့်မရှိစေ သား ဆန်ကျင်ရန် လိုသည်။ တစ်ဘ၀သာမက ဘ၀သံသရာ
မဆလ၀ါဒဖြန့်မှု အောက်၌သာ ကြီးပြင်းခဲ့
သွတ်သွင်းခဲ့ကြ အဆက်ဆက်နှင့် ဆိုင်သော ကိစ္စ ဖြစ်သည်။ “တပ်မတော်
သည်။ “သူရဲဆိုတာ ဘာမှန်း မသိမမြင်ဖူးသော လူကြီး တစ် သမိုင်း၊ တပ်မတော်ဂုဏ်သိက္ခာ အစဉ်အလာ" နှင့်ဆိုင်သော ဦးက ကလေးငယ်ကို သူရဲကြီးဆိုပြီး ခြောက်လှန့် ထားခြင်း” ကိစ္စလည်း ဖြစ်သည်။ ယခင် ဆိုဗီယက် တပ်မတော်၊ ထိုင်း နှင့် တူပေတော့သည်။ ထိုအခါ တပ်မတော်သားများသည် တပ်မတော်တိုကို နမူနာ ယူသင့်သည်။ သူတို့သည် အာ စစ်အာဏာရှင်ကြီးများ အပင်းသွင်း ဆေးထိုးထားတဲ့ အပင် ဏာရှင်အတွက်၊ မတရားမှုအတွက်
ကို စားကောင်း သောက်ဖွယ်ထင်၍ မစူးစမ်းတော့ပဲ သဒ္ဓါ သေနတ်ပြောင်း မလှည့်ခဲ့ကြပေ။ ဆိုဗီယက်တွင် စစ်တပ်က စိတ်သက်သက်ဖြင့်
စားမိကြသည်။ ဒီမိုကရေစီကို ငါတို့ မနှိမ်နင်း၍ ဆိုဗီယက် ပြိုကြွဲ ခင်း မဟုတ်။ သူသမိုင်းနှင့် သူ
အတွင်းကျကျ သိရန်မလို (သိဖို့လဲ မကြိုးစား)၊ ဒီမိုကရေစီ ရှိသည်။
အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးခြင်း၊ ကွန်မြူနစ် စနစ်
ဆိုတာ မကောင်းဆိုးပါး၊ တို့နိုင်ငံအတွက် လုံးဝမသင့်တော်၊ ကျဆုံးခြင်းသာဖြစ်သည်။ ယခုအာဏာရှင်အတွက် ပြည်သူ နယ်ချဲ့များ၏ နယ်ချဲ့ ရန် စကားလုံး၊ ဒီမိုကရေစီ အော်သူ လူထုကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်သော စစ်တပ်မှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒိ့ရုန်သူ ဟုမှားယွင်းစွာ ထင်မြင်လာကြတော့ရာ ဒီမိုကရေ ထင်ထင်ရှားရှား တရုတ်နှင့် မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံသာ ရှိသည်။ စီ တောင်းဆိုသူ
ပြည်သူလူထုနှင့် တပ်မတော်တို့ အမြင် ရှက်စရာ
ကောင်းလှသည်။ မှန်ကန်သော အသိဥာဏ်ရှိ
မတူရာမှ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်လာကြသည်။ ထို့အပြင် တပ်ဖွဲ့ လျှင် ထိုယုတ်မာရိုင်းစိုင်းသော လူသတ်မှု၊ ရာဇ၀တ်မှုမျိုးကို စိတ် နှင့် ပေါင်းမိသောအခါ တပ်မတော်သည် ဒီမိုကရေစီ ကျူးလွန်ရဲမည် မဟုတ်။ အကယ်စင်စစ် လူသတ်မှုကို ပေါ် ဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုများ ဖြစ်သွားတော့သည်။တစ်ချိန်က ပေါ်ထင်ထင် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်၏၊ စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်များ ဖယ်ဒရယ်မူကို တပ်မတော်က မလိုလားသလို ယခု ဒီမိုက အဖြစ်
ရောက်ရှိစေ၏။ စစ်တပ်ကို အသုံးချပြီး တိုင်းပြည်
ရေစီကိုမလိုလားမှု ဖြစ်လာသည်။ သေသေချာချာ မေးလျှင် အာဏာ
(ပြည်သူအာဏာ) ကို လုယူချုပ်ကိုင်ထားသော
တော့ ခြေခြေမြစ်မြစ်မသိ။ ကြားပင် မကြားဖူးသော သူများ စစ်အာဏာရှင် (ယူနီဖောင်းဝတ်များ)
ပင် တွေ့ရဖူးသည်။ ထိုသို့ တပ်မတော်အတွင်း၌ စိတ်ဓာတ် သည့်ကိစ္စ မဆို အကျိုးကိုသာ ပြောတတ်သည်။ အကြောင်း အသွင်းခံရခြင်းသည် နို်င်ငံရေး၌ တပ်မတော်နှင့် ပြည်သူလူ တရားကို ဘယ်တော့မှ မပြော။ အကြောင်းတရားကိုလည်း ထု ထိပ်တိုက် ဖြစ်နေရခြင်း အကြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ အသေအချာ စဉ်းစား ဆင်ခြင်ခြင်းလည်းမရှိ။ မတတ်သာ၍ တပ်မတော်သားများကို မေးခွန်းထုတ်လိုသည်? ကိုယ်ကိုယ် အကြောင်းတရားကို ပြောရလျှင်လည်း အာဏာရှင်တိုကို မ တိုင် ကောင်းစွာမသိ၊ မခံစားဖူးသော အရာ
ကိစ္စတစ်ခုကို ထိခိုက်အောင် မမှန်မကန်နှင့်အပေါ်ယံသာလိမ်ညာ ပြောကြ
စစ်အာဏာရှင်များ ပြောတိုင်း မျက်စိစုံမှိတ်ကာ မစူးမစမ်း၊ သည်။ ထိုစစ်အာဏာရှင်များကြောင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး “တိုင် မဆင်မခြင် မကောင်းမြင်ခြင်း၊ ဖင်ပိတ် ငြင်းဆို နေခြင်းများ ပတ်” နေရခြင်း ဖြစ်၏။ သည် သင့်တော်မှု
ရှိပါရဲ့ လား။ ပိန္နဲသီး (သို့) ဒူးရင်းသီး စွာ လေ့လာဖြေရှင်းလိုက်လျှင် နိုင်ငံရေးမှာ လွယ်ကူစွာ ရှင်း
ဆိုတာ ဆူးတွေနဲ့ ကွ၊ အထဲမှာလဲ
အဆိပ်ရှိမှာ သေချာ လင်းသွားနိုင်သည်။ အရာရာ ဖြောင့်ဖြူးသွား နိုင်သည်။
တယ်။ မစားနဲ့ဆိုလျှင် ကိုယ်တိုင် မစူးစမ်း မလေ့လာပဲ၊ မ နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ကာ တိုးတက်ဖွံဖြိုးသွားနိုင်မည်။ စစ်အာ သိပဲ ဟုတ်မှာပဲ၊ ဒါ မကောင်းတဲ့ အသီးကြီးကွ. မစားကြနဲ့လို့ ဏာရှင်များက စည်းစိမ်အာဏာယစ်မူးပြီး မိမိတို့သာ မြန်မာ ပြောနေကြမှာလား။
သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့် ကြစေ နိုင်ငံတွင်
ချင် ပါသည်။ စစ်မှုရေးရာ ကိစ္စရပ်များတွင်တော့ စစ်သားဆို ဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးကို ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ချင်ကြ သည်မှာ အမိန့်ကို မြေ၀ယ်မကျ နာခံရပေမည်။ သိုသော် သည်မဟုတ်။
ယခု ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုသည့် ကိစ္စသည် နိုင်ငံတော်ကို အာဏာရှင် လုပ်ချင်သည်။ “ငါသေမှ ငါ့နေရာရမည်” ဟုပင် အန္တရာယ်ကျရောက်မည့် စစ်ရေးစစ်ရာ ကိစ္စလုံးဝ မဟုတ်။ မဆို၊ “ငါ သေရင်တောင် ငါ့နေရာ ငါယူသွားမည်” ဆိုသော ပြည်သူလူထုနှင့် သက်ဆိုင်သော ကျယ်ပြန်အရေးကြီးသည့် လူစားပင်။ နိုင်ငံရေး ပြေလည်၍ ၄င်းတို့ အာဏာ
နိုင်ငံရေးကိစ္စ၊ ပြည်သူအာဏာ နှင့်သက်ဆိုင်သော ကိစ္စ လွတ်ရမှာ စိုးရိမ်သည်။ ပြည်သူအာဏာ သက်ရောက်သော ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်၏ အာဏာပိုင်ရှင် အစစ်သည် ပြည်သူ ဒီမိုကရေစီ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (ကျင့်စဉ်) ကို အကြောက်
လူထုသာဖြစ်သည်။ သူအာဏာသူ ပြန်တောင်းခြင်းသာဖြစ် ကြီး ကြောက်ကြသည်မှာ စစ်အာဏာရှင်၏ သည်။ တပ်မတော်သားများနှင့်လည်း တပ်မတော်သားများ၏
မိဘဆွေမျိုးသားချင်း မရှိ၊ ဒီမိုကရေစီ မရှိ”၊ “ပြည်သူလူထု၌ အာဏာရှိလျှင်
သူငယ်ချင်းများနှင့်လည်း ဆိုင်သည့် နိုင်ငံရေး ကိစ္စဖြစ်၍ ဒီမိုကရေစီ ဒီနေရာမှာတော့
သက်ဆိုင်သည်။ ပင် ဖြစ်သည်။ “အာဏာရှင် ရှိလျှင် ပြည်သူလူထု၌ အာဏာ ရှိလျှင် အာဏာရှင် မရှိနိုင်”။ ထို့ကြောင့်
ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နှင့် စူးစမ်း လေ့လာကာ ယူနီဖောင်းဝတ် အာဏာရှင် ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ ဒီမိုကရေစီကို
သတိထား ဆင်ခြင်သင့်သည်။ နိုင်ငံရေးသည်
ကြီးမား ရန်လုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီကို
ကျယ်ပြန့်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးလှသည်။ စစ်ရေး ခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်တပ်ကို အသုံးချ အကာအကွယ်ယူပြီး သည်
နိုင်ငံရေးသည် စစ်ရေးထဲမှ တစိတ်တဒေသ
အသက်ဆက်ဖို့ အကွက်ဆင်ကာ နအဖ ဖွဲ့
မဟုတ်ပေ။ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို အတင်းအဓမ္မ
မိမိတို၏ ကျေးဇူးရှင်စစ်ဖြစ်သော မိဘပြည်သူများနှင့် သက် တည်ပြုနေခြင်း ဖြစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့ ပြောသလို ဆိုင်နေ၍ မတရားသော အမိန်၊ စစ်ရေးစစ်ရာ မဟုတ်သည့် နိုင်ငံရေး၊ အမိန်မျိုးကိုမူ
ဆင်ခြင် သုံးသပ်သင့်သည်။ ရွှေဝါရောင်
စီးပွားရေး၊ စစ်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး အမြင် (၄)
တော်လှန်ရေးကဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်အရ ၀င်ရောက် အရွေးခံ နိုင်ကြသည်။
သုိ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးတွင် တပ်မတော်သားများ အနေနှင့် ၄င်းတို့ အရည်အချင်း ရှိလျှင် ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက် ၀ိနည်းလွတ်
ကျည်ကန်လန်ခံ၊ ကျည် “အ” စသဖြင့် နိုင်သည်။လက်နက်ကိုင်
အပြစ်၊ ကျည်အိမ် အံမကျ၊ မရှိကြ။
သေချာသည်။ ထိုသို့လည်း ၄င်းတို့ သတ္တိ
ဆင်ခြေပေးရှောင် စိတ်မချသေးဘဲ ကြံ့ဖွ့ေံတွကို အမာခံ ထားကာ ပါတီ (၃)
ရန်သူများ မဟုတ်ပါဘဲ ပြည်သူ ပါတီ အရွေးခံရန် ပြင်ဆင်နေကြပါသည်။
လူထုထဲ ပစ်ခတ်ခိုင်းသည့် အမိန်၊